မှော်ဆန်တဲ့အချစ် – My Blog
ကျွန်တော်က အားရင်အားသလို ရွားဦးဘုန်းကြီးကျောင်းက ခရေပင်ကြီးကို ဝန်းရံထားတဲ့ ကွပ်ပျစ်လေးပေါ်မှာ သွားပြီးနေလေ့ရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာ နိမ့်မြင့်မရွေး လက်ခံပေးနေတဲ့နေရာဆိုတော့ စဏ္ဍာလ လို့ခေါ်တဲ့တောင်းစားတဲ့သူတွေလာရင်လည်း အဲဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လာရောက်တည်းခိုလေ့ရှိတယ်။ကျွန်တော်က ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာနေရင် သူတို့က. ကွပ်ပျစ်နားက ဇရပ်ပေါ်မှာနေကြပြီး ချက်ပြုတ်စားသောက်နေကြတယ်။တစ်ရက်မှာတော့ ကျွန်တော်ရယ် သူငယ်ချင်းသုံးလေးယောက်ရယ် ကွပ်ပျစ်ပေါ်ထိုင်နေတုန်းမှာပဲ “ညီလေးတို့…ဆေးလိပ်လေးမပါဘူးလား”ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ စဏ္ဍာလကြီးတစ်ယောက်က ဆေးလိပ်လာတောင်းတယ်။”လာဘ်သိပ် လိုက်တာကွာ””မပါဘူး ဗျာ ပါလည်းမတိုက်ဘူး”အသံမျိုးစုံနဲ့အတူ နှာခေါင်းရှုံ့သူကရှုံ့ပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေထထွက်သွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း သူ့မျက်နှာကြည့်ပြီးသနားသွားတာနဲ့ “ဦးလေး…ဆေးလိပ်အရမ်းသောက်ချင်နေလား”လို့မေးလိုက်တော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြပါတယ်။
”အဲဒါဆို ခဏစောင့် ကျွန်တော့်မှာတော့မပါသေးဘူး ဝယ်လာပေးမယ်”လို့ပြောလိုက်တော့ “ပိုက်ဆံယူသွားလေ…ဦးတို့ဆိုရင် ဆိုင်တွေကမရောင်းချင်သလိုနှင်ထုတ်ကြတယ် အဲဒါကြောင့်မဝယ်ရဲလို့ပါ” လို့ပြောလာတော့ “ရပါတယ် ကျွန်တော် ဝယ်တိုက်ပါ့မယ်”ပြောပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဈေးဆိုင်ရောက်တော့ ရွှေရောင် ရူဗီဘူးလေးတစ်ဘူးဝယ်တော့ ဆိုင်ကအစ်မကြီးက”ဟဲ့ကောင်လေး နင်သောက်မလို့ဆိုမရောင်းဘူးနော် အိမ်တိုင်လိုက်မယ်”လို့ပြောနေလို့ “ဧည့်သည်တိုက်ဖို့ပါ”လို့ မနည်းပြောပြီးဝယ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းပြန်ရောက်တော့ စဏ္ဍာလကြီးကိုဆေးလိပ်ဘူးပေးလိုက်တာ အငမ်းမရဖွင့်သောက်ပါတော့တယ် “ကျေးဇူးပဲကွာ အရမ်းသောက်ချင်နေတာ”လို့ပြောတော့ ရပါတယ်ပြောပြီးကွပ်ပျစ်ပေါ်ဆက်လှဲနေခဲ့တာ သူလည်းဇရပ်ဘက်ကသူ့အဖော်တွေဆီသွားပြီး ဆေးလိပ်သွားဖွာနေချည်ပါတော့တယ်။
တစ်ရက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော်ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ လှဲအိပ်နေတုန်း”ညီလေး….လို့ခေါ်သံကြားလိုက်ပါတယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ ကျွန်တော်ဆေးလိပ်တိုက်နေကျ စဏ္ဍာလကြီး “ဦးလေး ရောက်လာပြန်ပြီလား ဆေးလိပ် သောက်ချင်လို့လား”လို့ကျွန်တော်မေးတော့ သူက……. “ဦးလေးတို့အဖွဲ့က တစ်ခြားမြို့နယ်အထိသွားကြမှာ ငါ့ညီရှိမလားလို့ ဒီကိုခဏဝင်ကြည့်တာ ဦးလေးက” “ဘာကိစ္စ ရှိလို့လဲဗျ” “ဦးလေးပြောတာကို ယုံယုံကြည်ကြည့်နဲ့လုပ်ရင် ငါ့ညီအတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်” “ဘာကိုလဲ ဦးလေး ကျွန်တော်နာမလည်ဘူး” သူက သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထောင်အရှည်ကြီးထဲကနေပြီး ပစ္စည်းတစ်ခုနှိုက်ယူလိုက်ပါတယ် ရှ့ုံအိတ်လေးတစ်ခုပါ ချည်ထားတဲ့ကြိုးကိုဖြည်ပြီးတော့ အိတ်ထဲက ပစ္စည်းလေးကိုထုတ်လိုက်တော့ နက်ပြောင်နေတဲ့
ကလေးပေါက်စအရုပ်ကလေးတစ်ရုပ် သူက “ငါ့ညီဘဝမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ယောက်ကိုစိတ်ထဲကနေတပ်မက်လာခဲ့ရင် ဒီအရုပ်လေးကို လက်နဲ့ကိုင် ဖွဖွလေးပွတ်ပြီး အဲဒီမိန်းကလေးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုက်မိအောင်သွား ပြီးတော့ အရုပ်လေးကို ငါ့သားအဲဒါ မင်းအမေပဲ အဖေနဲ့အမေ အတူနေဖို့ ငါ့သားကြိုးစားပေးလို့ ပြော…အဲဒါဆို အဲဒီမိန်းကလေးက မင်းစိတ်ထဲကူးနေတဲ့နေရာကို ရောက်အောင်လာလိမ့်မယ်” “ဗျာ…တကယ်ဟုတ်လို့လားဗျ” “ငါ့ညီကို ဦးလေးပြောခဲ့သလိုပဲ ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးရင်မှန်မှန်ကန်ကန်အကျိုးရှိလိမ့်မယ် ဒီအလာမှာ ငါ့ညီကို ဒီကွပ်ပျစ်မှာ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်တွေ့ရင် ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ပေးမယ် မတွေ့ရင်မပေးဘူးဆိုပြီး အဓိဌာန်နဲ့လာတာပဲ ငါ့ညီကိုတန်းတွေ့တာ ကဲပါကွာ ဦးပြောတာမှတ်ထား ယုံကြည့်ရင်အကျိုးပြုလိမ့်မယ်”ပြောပြီး ကျွန်တော့်လက်ထဲအိတ်လေးလိုက်ထည့်ပေးပြီး သူထွက်သွားပါတယ်။
ခြေလှမ်းလေးငါးလှမ်းအရောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ “ငါ့ညီ…သူ့ကို နို့ဆီပဲဖြစ်ဖြစ် နွားနို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နေ့တိုင်းခွက်သေးသေးလေးနဲ့ သူ့ဘေးချပေး”ပြောပြီးဆက်ထွက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော် ရှုံ့အိတ်လေးကိုင်ပြီး ငေးကျန်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ အရုပ်ကလေးကို မေမေတို့စားခဲ့တဲ့ စတုမဓူ ပုလင်းခွံလေးထဲထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ယုံသလိုမယုံသလိုပေမယ့် ဟိုဦးလေးကြီးမှာသွားသလို သူ့ကိုကျွေးဖို့ရာ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ဆိုင်က နို့ဆီတစ်ဗူးသွားဝယ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ရောက်တော့ “နို့ဆီ တစ်ဗူးပေးပါ”လို့ပြောလိုက်တယ် အရုပ်ကလေးလက်ထဲရောက်ပြီးမှသတိထားမိတာ အဲဒီအိမ်ဆိုင်က ညီအစ်မသုံးယောက်အပျိုကြီးတွေပိုင်ကြတာလေ။အကြီးဆုံးက သုံးဆယ်လောက် ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆီလောက်ကွာမယ်ထင်တာပဲ။ အကြီးဆုံးရဲ့ပုံစံက ခပ်ပိန်ပိန် သွယ်သွယ်နဲ့အရပ်မြင့်ပြီး အသားဖြူဖြူ ဆံပင်ရှည်ကို ဘီးစပတ်အမြဲပတ်ထားတယ် မျက်နှာကတော့ ချောတယ်ပြောရမှာပဲဗျ။အလတ်မကကျတော့ ခါးနည်းနည်းတုတ်တယ် ခပ်ပြည့်ပြည့်ပေါ့ဗျာ အသားကတော့နည်းနည်းညိုတယ် ကျစ်ဆံမြည်းအမြဲကျစ်ထားလေးရှိပြီး စွဲမက်စရာကောင်းတာက သူ့ဖင်နဲ့နို့ကြီးတွေကအယ်နေတာပဲ။
အငယ်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ ကျောင်းပြီးထားကာစ အကြီးနှစ်ယောက်ကအလိုလိုက်ထားတယ် ပုံစံက ခေတ်ဆန်ဆန်နဲ့။ဆံပင်ကျောလယ်လောက်ကို အမြဲဖြောင့်ထားပြီး စကပ်ပါးပါးလေးတွေ အသားပျော့ပျော့တွေအမြဲဝတ်တယ် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ချစ်စရာလေးပါပဲ။သူ့ပုံစံက ဘယ်သူ့မှသိပ်ဂရုမစိုက်တဲ့ထီမထင်ပုံစံနဲ့နေတာဆိုတော့ သိပ်မကပ်ရဲကြဘူး။သူတို့ရှင်းပြနေတာနဲ့ပဲ နို့ဆီဗူးဝယ်တာလမ်းကြောင်းလွဲတော့မယ် ဆိုင်ထိုင်နေတာကအလတ်မဗျ နို့ဆီဗူးလှမ်းပေးရင်းနဲ့ သူရဲ့အကျႌကနည်းနည်းဟိုက်တော့ အသားညိုပေမယ့် နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးအရင်းပိုင်းကို မြင်လိုက်ရတာ တံတွေမြိုချ ပိုက်ဆံရှင်းပြီး အမြန်ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အရုပ်ကလေးထည့်တဲ့ပုလင်းထဲကို နို့ဆီဗူးထဲကနို့ဆီကို အချိုရည်ပုလင်းဖုံးလေးနဲ့ထည့်ပြီး ပုလင်းဖုံးပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အိပ်ရာထဲလှဲရင်း ဈေးဆိုင်ကအလတ်မရဲ့ နို့အုံကြီးစိတ်ထဲမြင်လာတာနဲ့ လက်နဲ့ဖြေဖျောက်ပြီး အိပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ မနက်အိပ်ရာနိုးလာတော့မျက်နှာမသစ်သေးခင် အရုပ်လေးကိုအမှတ်ရပြီးပုလင်းထဲလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေပြူးကျယ်သွားမိခဲ့ရတယ် မအိပ်ခင်ကထည့်ထားတဲ့နို့ဆီတွေ တစ်စက်မှမကျန်တော့ဘူးလေ။ပုရွက်ဆိတ်ဝင်ပြီးစားအောင်လည်း ပုလင်းကအလုံပိတ်ထားသလို ဘေးမှာပုရွတ်ဆိတ်အစအနတောင်မမြင်ရဘူး။ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ယုံကြည်စိတ်စပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ နို့ဆီကို အချိုရည်ပုလင်းဖုံးလေးထဲပြန်ထည့်ပြီး ပြန်ပိတ်ထားခဲ့ပါတော့တယ်။ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကျန်နေတာ ဈေးဆိုင်က အကြီးဆုံးမက တင်တင်မာ အလတ်မက ခင်ခင်မာ အငယ်ဆုံးက ယဉ်ယဉ်မာတဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကြီး ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ “ကျော်စွာ”……မနက်ပိုင်းကိုအရုပ်လေးအိပ်ရာဘေးမှာပဲထားခဲ့ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည်သောက်ဘာညာထွက်နေခဲ့ပြီး ပြန်လာတော့ ကြည့်လိုက်တာ နို့ဆီတွေမရှိတော့ပြန်ဘူး အဲဒါနဲ့ပဲ လက်တွေအသုံးချကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ညနေပိုင်းရောက်တော့ ဈေးဆိုင်ကအလတ်မရဲ့ နို့အုံကြီးတွေဖင်ကြီးတွေကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားနေမိတာနဲ့ တွေ့ရင်တော့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီး အရုပ်ကလေးလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ရင်းသွားလိုက်ပါတယ်။ကံဆိုးချင်တော့ အကြီးဆုံး မတင်တင်မာက ဈေးဆိုက်ထိင်နေတယ် သူက “ဘာယူမလဲ”မေးတော့ ကြံရာမရ သွားတိုက်တံတစ်ချောင်း ဆိုပြီးပြောလိုက်တာ သွားတိုက်တံကို ကောင်တာထဲက ထယူနေတုန်း မထူးပါဘူး စမ်းကြည့်မယ်အရင်ရှုံးတာမှတ်လို့ ဆိုပြီးတွေးရင်း အရုပ်လေးကို ပါးစပ်နားကပ်ရင်း”သားလေး အဲဒါမင်းအမေပဲ အဖေနဲ့မင့်အမေအတူအိပ်ဖို့ ဒီည အိမ်ရှေ့ကအဖေစောင့်နေမယ် မင့်အမေထွက်ဖို့လုပ်ပေးအုံး”ဆိုပြီး တိုးတိုးပြောလိုက်ပါတယ်။မတင်တင်မာ့ဆီကသွားတိုက်တံယူ ပိုက်ဆံပေးပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့တစ်နေ့လုံးနေမထိထိုင်မရနဲ့ ညပဲရောက်ချင်နေမိတယ်ဗျာ။ အချိန်တွေကလည်းကုန်တာနှေးနေသလိုပါပဲ ညနေပိုင်းရောက်တော့ ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားလဲ ထမင်းစားပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမိတယ်။
အပျိုကြီးမတင်တင်မာများ တကယ်လာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လုပ်ရကိုင်ရမယ့်အရာတွေကို ချနေမိတယ် စိတ်ကူးနဲ့။ ညရှစ်နာရီလောက်ရောက်တော့ သူတို့ဆိုင်လေးသိမ်းပြီး အားလုံးအိမ်ထဲဝင်သွားကြတယ် ကျွန်တော်လည်း အိမ်ရှေ့ကခုံလေးပေါ်ထိုင်ရင်း သူတို့အိမ်တံခါးဘက်မျှော်ပြီးစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ညကိုးနာရီလောက်အရောက်မှာ မေမေက “မအိပ်သေးဘူးလား”လို့လှမ်းမေးတော့ “အိပ်မရသေးဘူး မေမေ”လို့လှမ်းဖြေလိုက်ပြီး ဆက်ထိုင်နေပါတယ်။တစ်ရွာလုံးလုံးလူခြေတိတ်ပြီး ငြိမ်သက်သွားတဲ့ ညဆယ်နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာတော့ မတင်တင်မာတို့ အိမ်တံခါးပွင့်လာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်း မယောင်မလည်နဲ့အိမ်ထဲကနေလမ်းပေါ်ထွက်ကြည့်တော့
ကျွန်တော်ရှိရာကို တန်းပြီးလာနေတဲ့ မတင်တင်မာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော့်နားအရောက် မျက်လုံးတွေကငေးပြီး ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတာနဲ့ ခပ်တည်တည်ပဲ သူ့လက်ကိုဆွဲကိုင်တော့ သူဘာမှမပြောဘူး အဲဒါနဲ့ပဲ လက်ကိုဆွဲပြီး နွားတင်းကုပ်အပေါ်က နွားစာထားတဲ့ တဲလေးထဲ ခေါ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။နွားစာထားတဲ့တဲလေးက တစ်ခြမ်းမှာ ကောက်ရိုးတွေအပြည့်ထည့်ထားပြီး နောက်တစ်ခြမ်းက ပဲပေါ်ချိန် ပဲမှော်တွေထားဖို့ နှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။ပဲပေါ်ချိန်မဟုတ်တော့ ပဲမှော်ထားတဲ့ဘက်ကို ဖျာလေးခင်းပြီး ခေါင်အုံးလေးနဲ့ ကျွန်တော်ပျင်းရင်းသွားနေနေကြနေရာလေး။တဲလေးပေါ်ရောက်တော့ မတင်တင်မာကို ဖျာလေးပေါ်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
သူစကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ် ဘာမဆိုပဲ ကျွန်တော်လည်းခပ်တည်တည်နဲ့” အစ်မအဝတ်တွေ အားလုံးချွတ်လိုက်နော်”လို့ပြောလိုက်တာ အပါးပါး…အပျိုကြီးတကယ်ပဲ သူ့အဝတ်တွေချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ပိန်နေတော့ သူ့ရဲ့သေးကျင်တဲ့ခါးလေးနဲ့မို့ အပျိုကြီးရဲ့ဖင်သားတွေက ရှိသင့်သလောက်တော့ရှိနေတာပါပဲ နို့တွေက နည်းနည်းတွဲသယောင်ရှိပေမယ့် သိပ်မကြီးဘူးဗျ။ အသားဖြူတဲ့သူဆိုတော့ ညဘက်တောင်မှ ဖွေးဖြူနေတာပဲ နို့တွေက ပေါင်ခွကြားမှာတော့ အမွှေးမည်းမည်းတွေဖုံးအုပ်ထားတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီး လူကသာပိန်တာဗျ စောက်ဖုတ်ကတော့မသေးဘူး။ ကျွန်တော်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ကြီး လုက်နဲ့ကိုင်ကြည့်ပါတယ် သူမငြင်းပါဘူး အမွှေးတွေကကြမ်းပေမယ့် စောက်ဖုတ်သားတွေကနူးညံ့တယ်ဗျ။နောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး သူ့အပေါ်မှောက်ပြီး နို့တွေစို့ပါတော့တယ်။ နို့တွေကို ဘယ်ညာပြောင်းပြီးအားရပါးရစို့ပေးနေတော့ မတင်တင်မာရဲ့နှုတ်ဖျားက တဟင်းဟင်းနဲ့ ငှက်ဖျားတက်သလို ညည်းနေပါတယ်။ လက်ကလည်း အမွှေးကြမ်းတွေဖုံးအုပ်နေတဲ့အဖုတ်ကြီးကိုပွတ်သပ်ရင်းနဲ့ အကွဲကြောင်းထဲလက်ခလယ်နဲ့ပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။
ဖတ်ထားသမျှ မှတ်သားသမျှနည်းလမ်းစုံနဲ့ ကလိနေတာ အပျိုကြီးစောက်ဖုတ်ကအရည်တွေစိမ့်လာပါတော့တယ် လီးကလည်းအရမ်းတောင်နေပြီမို့ လိုးဖို့ပြင်ဆင်ပြီး “အစ်မ လုပ်တော့မယ်နော်”လို့ပြောတော့ သူကပါးစပ်ကပြန်မဖြေပဲခေါင်းငြိမ့်ပြပါတယ်။ ပက်လက်အနေအထားနဲ့ပဲ မတင်တင်မာရဲ့ခေါင်းအောက်ကခေါင်းအုံးကို ခါးအောက်ပြောင်းပြီးခုလိုက်တော့ လီးနဲ့တန်းတူအဖုတ်ပြီးကစိုရွှဲဖောင်းကြွပြီး ကြိုဆိုနေတော့တာပါပဲ။လီးကို တေ့ပြီးတစ်ရစ်ခြင်းသွင်းလိုက်တော့ စီးစီးလေးပဲ အဖုတ်ထဲဝင်သွားပါတယ်။အပျိုကြီးမျက်နှာအနည်းငယ်မဲ့သွားသလိုပါပဲ အဲဒီနောက် ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ လိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော့်ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ထပ်တူ မတင်တင်မာကလည်း ကော့ကော့ပေးနေလေရဲ့။ စီးပိုင်နေတဲ့ခေတ်ဟောင်းအဖုတ်ကြီးရဲ့အရသာကြောင့် ကျွန်တော်လည်း အရှိန်မြှင့်ပြီးဆောင့်လိုက်ပါတယ်။နွားစာတဲကြမ်းခင်းက တကျွိကျွိမြည်သံအနည်းငယ်နဲ့အတူ လီးအဝင်အထွက် ဖွတ် ဖွတ်အသံနဲ့ ဆီးခုံခြင်းရိုက်သံတစ်ဖတ်ဖတ်က ကျွန်တော်နဲ့မတင်တင်မာရဲ့ကာမဇာတ်အတွက် နောက်ခံတေးဂီတပါပဲ။
သူ့ရဲ့တအီးအီးညည်းသံကလည်း ကာမရဲ့ရသကို ပိုမိုပြီး မြှင့်တင်ပေးနေသလိုနဲ့………. “ကျိ….ကျွိ…ကျွိ……ကျွိ” “ဖတ်…ဖလွတ်….ဖတ်….ဖလွတ်” “အီး….အီး…..အီး…..အီး…” တဲလေးပေါ်က မြိုင်ဆိုင်လှတဲ့လိုးပွဲရဲ့အသံလေးတွေ။ “အစ်မ အပေါ်ကလုပ်ပါလားဟင်…… ”ကျွန်တော်ပြောကြည့်လိုက်တော့ သူကထုံးစံအတိုင်းခေါင်းညိတ်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း အရည်တွေစိုပြီးပြောင်လက်နေတဲ့လီးကြီးကိုပြန်ထုတ်လိုက်တော့ မတင်တင်မာက လှနေရာကထလာပါတယ်။ခေါင်းအုံးကို ခေါင်းအောက်နေရာပြန်ပြောင်းပြီး ကျွန်တော်ပက်လက်လှန်နေပေးလိုက်တော့ မတင်တင်မာက ခွပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကိုလက်နဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ပွတ်လိုက်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့တေ့လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ ဖြေးဖြေးချင်းအဆုံးထိထိုင်ချလိုက်တာ တစ်ပြောက်နှစ်ပြောက် လရောင်အောက်မှာ အပျိုကြီးမျက်နှာတစ်ချက်မဲ့သွားပါတယ်။ပြီးတော့ ကြမ်းခင်းပေါ်လက်ထောက်ပြီး အပေါ်ကနေဆောင့်ပါတော့တယ် ကျွန်တော်လည်းအောက်ကနေ အလိုက်သင့်လေးပင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလမတင်တင်မာလည်း အရှိန်မြှင့်ပြီးဆောင့်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သေးသွယ်တဲ့ခန္တာယ်ကိုယ်နဲ့ သွက်သွက်လက်လက်လှုပ်ရှားပေးနေတာ အောက်ကနေဇိမ်တွေ့နေခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့လီးထိပ်က ကျဉ်လာပြီးပြီးချင်လာခဲ့သလိုပဲ မတင်တင်မားရဲ့နှုတ်ဖျားက အမျိုးအမည်မသိတဲ့ညည်းသံတွေနဲ့အတူ ခပ်မြန်မြန်ပဲဆောင့်နေပါတယ်။ “အား……အား……အစ်မ ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်” သူကဘာမှပြန်မပြောပါဘူး ဆောင့်စရာရှိတာဆက်ဆောင့်နေရင်းနဲ့လေးငါးဆယ်လျက်အရောက်မှာ အပျိုကြီးမတင်တင်မာရဲ့စောက်ခေါင်းထဲ ကျွန်တော့်ရဲ့သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ပါတယ် သူလည်းဆောင့်ရင်းနဲ့တွန့်တွန်လာပြီး လေးငါးချက်ထပ်ဆောင့်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပေါ်မှောက်ကျသွားပါတယ်။
လီးနဲ့စောက်ဖုတ်တတ်ရက်အနေအထားမှာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆီးခုံက လီးမွှေးတွေကြားမှာသူ့စောက်ဖုတ်ကကျလာတဲ့အရည်တွေက စီးကပ်ကပ်နဲ့ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ခဏနေတော့ ပျော့နေတဲ့လီးကို သူက ကြွပြီးနှုတ်လိုက်တာ ဖလွတ် ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ နောက်ထပ်အရည်တွေထပ်ကျလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူလည်း ကျွန်တော့်ဘေး လှဲချလိုက်ပါတော့တယ်။အဲလိုနဲ့ လုပ်လိုက်နားလိုက်နဲ့ပဲ မတင်တင်မာနဲ့ကျွန်တော်ဟာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ တစ်ပေါင်ကျော်ရော လေးဘက်ထောက်ရော ဘေးတစ်စောင်းရော လေးချီလောက်ဆွဲလိုက်တာ ရွားဦးကျောင်းက အုံးမောင်းခေါက်သံကြားတော့ မနက်လေးနာရီထိုးပြီဆိုတာသိလိုက်ပြီး သူပြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတွေးမိပြီးထိတ်လန့်သွားပါတယ်။
ဒီအတိုင်းသာမိုးလင်းသွားရင်အပျိုကြီးကိုယူရတော့မှာလေ။အရုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဦးလေးက ခေါ်နည်းပဲပြောသွားတာ ပြန်လွှတ်ဖို့မပြောခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးတော့ကြံရာမရပဲ အရုပ်လေးပါးစပ်နားကပ်ပြီး “သားလေး မင်းအမေကိုပြန်ခိုင်းလိုက်တော့” လို့တိုးတိုးပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော် ကံကောင်းသွားသလို အရမ်းပျော်သွားခဲ့တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ မတင်တင်မာက သူ့အဝတ်အစားတွေသူ့ဖာသာပြန်ဝတ်နေလို့ပဲ။ပြီးတော့ သူ့ဖာသာပဲ တဲပေါ်ကနေဆင်းပြီးပြန်သွားခဲ့တယ် အံ့ဩစရာကောင်းတာက သူစိမ်ချည်းပဲဆို အမြဲဟောင်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်ကခွေး အောင်မောင်းက မတင်တင်မာ သူ့နားကဖြတ်သွားတာကို ခေါင်းလေးတောင်ထောင်မကြည့်ဘူးဗျာ…….. မနက်ပိုင်း ကျွန်တော် ကိုးနာရီကျော်မှအိပ်ရာနိုးတယ်ဗျ။
မျက်နှာသစ်ရင်းတစ်ခါတည်း ရေပါချိုးလိုက်တယ် ပြီးတော့ မေမေ ကြော်ထားတဲ့ထမင်းကြော်ကိုစားပြီး ဈေးဆိုင်ဘက် မတင်တင်မာရဲ့အခြေအနေကြည့်ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ သူဆိုင်ထိုင်နေတာနဲ့ညားတော့ ခပ်တည်တည်နဲ့အကြောင်းရှာပြီး ဘောလ်ပင်န်တစ်ချောင်းဝယ်လိုက်ပါတယ် ပိုက်ဆံပေးတော့သူက “မပေးနဲ့ရတယ်”လို့ပြောလာပါတယ် ဆက်ပြီးတော့ “ညကအတော်ဆိုးတာပဲ မင်းက”လို့ပြောပြီး ငှက်ပျောသီး ဖီးကြမ်းသုံးလုံးပေးလာပါတယ်”အားရှိအောင်စား အိပ်ရေးပျက်အားကုန်ထားတာ”တဲ့………..ကြည့်ရတာ ကျွန်တော့်ကို အတော်ကြွေသွားသလိုပါပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုလည်း မသိစိတ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပေမယ့် သူမှတ်မိနေခဲ့တယ် ဒီညတော့ ကြိတ်ခိုက်နေတဲ့ အလတ်မ မခင်ခင်မာကိုကြံမယ်လို့စိတ်ကူးနေမိပါတယ်။
အာရုံထဲမှာ သူ့ရဲ့နို့အုံကြီးကြီး ဖင်လုံးလုံးကြီးပဲမြင်နေမိခဲ့တာလေ ချချင်စိတ်ကမနည်းပြင်းထန်နေခဲ့တာ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ အရုပ်လေးကိုကိုင်ပြီး အဲဒီဆိုင်ဘက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ရှေ့ရောက်မှကြည့်လိုက်တာ အငယ်ဆုံးမ ယဉ်ယဉ်မာ ဆိုင်ထိုင်နေတာဗျ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေတာ ဈေးဝယ်သူရောက်တာတောင်မသိဘူး။အဲဒါနဲ့ပဲ “အဟမ်း”လို့ချောင်းဟန့်ပြီးအသံပေးလိုက်တော့မော့တောင်မကြည့်ပဲ “ဘာယူမလဲ”တဲ့မေးလာပါတယ် ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲပေါ်တာ ဘလိတ်ဓား တစ်ကတ်လို့ပြောလိုက်တော့ သူက “စာဖတ်ရတာ အာရုံနောက်လိုက်တာ တစ်ရာဖိုး နှစ်ရာဖိုးနဲ့”လို့တိုးတိုးပြောရင်း ဘလိတ်ဓားကတ်ထယူပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်က နှစ်ရာတန်တစ်ရွက်ပေးတော့ မကြည့်ပဲယူပြီး ဈေးဖိုးထည့်တဲ့သေတ္တာထဲထည့်ထားလိုက်ပါတယ် ။နောက်တော့ စာပဲဆက်ဖတ်နေပြန်တော့တာ ကျွန်တော်လည်းအစက အလတ်မတွေ့မှကြံမယ်စိတ်ကူးလာခဲ့တာ မတူသလိုမတန်သလို မပြောချင်သလိုလုပ်နေတာ အမြင်ကပ်လာတာနဲ့အရုပ်လေး ပါးစပ်နားကပ်ပြီး”သားလေး အဲဒါမင့်အမေပဲ အဖေနဲ့အမေအတူအိပ်ရဖို့ လုပ်စမ်းအုံး”လို့ပြောပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ညပိုင်းရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲမေမေတို့အိပ်တဲ့အချိန်စောင့်နေခဲ့တယ်။ လူခြေတိတ်ချိန်အရောက်မှာ အိမ်ရှေ့ကနေထွက်စောင့်နေလိုက်တာ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ယဉ်ယဉ်မာ ထွက်လာတာမြင်ရတယ် လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ အချစ်ဗိမ္မာန် နွားစာတဲလေးဆီခေါ်လာခဲ့တယ်။
သူရဲ့လုပ်ပုံတွေ အချိုးတွေ နေ့ခင်းတုန်းကမကျေနပ်နေတာဆိုတော့ ရောက်ရောက်ချင်းပဲ အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့ “အဝတ်အစားတွေ ချွတ်စမ်း”လို့ပြောလိုက်တော့ စကားပြန်မပြောပဲ သူ့အဝတ်တွေ တစ်ခုချင်းစီစချွတ်ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံး ဘာမှမကျန်ပဲ ဗလာဖြစ်သွားတော့မှကြည့်လိုက်တာ သူ့နို့အုံဖွေးဖွေးလေးတွေမှာ နို့သီးခေါင်းကသေးသေးလေးတွေဗျ စောက်ဖုတ်ကျပြန်တော့လည်း မတင်တင်မှာလို အမွှေးတွေထူမနေပဲ အမွှေးနုနုလေးတွေ နည်းနည်းပဲရှိနေတာ။စိတ်ထဲ သိပ်မကြည်တဲ့သူဆိုတော့ “လီးစုပ်ပေးစမ်း “လို့ အမိန့်ဆန်ဆန်ပဲခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
သူကဘာမှမပြောပဲ ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျွန်တော်ကပက်လက်လှန်ပေးတော့ လီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့စုပ်ပေးရှာပါတယ်။လုပ်စမရှိတဲ့သူဆိုတော့ စုပ်ဆို စုပ်ရုံပဲ သေချာမလုပ်တတ်ဘူး အဲဒါနဲ့” ဒစ်လေးလည်း လျှာနဲယက် ဂွေးအုတွေရောလိုပြီး ယက်စုပ်ပြီး သေချာလုပ်”လို့ပြောလိုက်တော့လည်း ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော့်လည်း သူ့နို့ လုံးကျစ်ကျစ်လေးကိုလှမ်းကိုင်ပြီး ဆုပ်နယ်ပေးနေလိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ “ဂွေးအုတွေနဲ့လက်နဲ့ပွတ်ပြီး လီးကိုပါးစပ်နဲ့စုပ်ပေး”လို့ပြောလိုက်တော့ သူကလုပ်ပေးပါတယ်။စိတ်ထဲမှ ခုမှ အရမ်းကို ခံလို့ကောင်းပြီးဖီလ်းရှိနေပါတယ်။
”ပြွတ်….ပြွတ်”ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ…. “လုပ်…လုပ်…သေချာလေးစုပ်ပေး ကောင်းလာပြီ”လို့ပါးစပ်ကထုတ်ပြောလိုက်တော့ သူလည်း တတ်သမျှမှတ်သမျှနဲ့ သေချာစုပ်ပေးနေလိုက်တာ သူ့အာငွေ့နွေးနွေးလေးထဲမှာ လီးကအရမ်းတင်းမှာလာပြီး ပြီးချင်သလို ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အစကတော့ ပြီးရင် ပါးစပ်ကနေထုတ်ခိုင်းမလို့ပဲ ဒါပေမယ့် သူ့ပုံစံကိုစိတ်ထဲမကြည်လက်စရှိနေတာမို့ လ်ှတ်ပေးထားရင်းနဲ့”ပြွတ်……ပြွတ်…..ပြွတ်….ပြွတ်”ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အရှိန်မြှင့်ပြီး သွက်သွက်လေးစုပ်ပေးမှုနဲ့အတူ “အား….အား…..ပြီးတော့မယ်…..ပြီးတော့မယ်”လို့ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ညည်းရင်းနဲ့ ခဏနေတော့ သူ့ပါးစပ်ထဲကို ကျွန်တော့်သုတ်ရည်တွေပန်းပြီးထည်းလိုက်ပါတော့တယ်။”ငါ့သုတ်ရည်တွေ မြိုချလိုက် ယဉ်ယဉ်မာ”လို့ပြောလိုက်တော့ သူမြို့ချပါတယ် အနည်းငယ် သူ ပြို့ချင်သလိုဖြစ်ပေမယ့်ရအောင် မြိုချလိုက်ပါတယ်။
”ငါ့လီးကိုပြန်တောင်လာအောင်ဆွပေး ဒီခါလုပ်တော့မယ်”လို့ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပြောလိုက်တော့ သူလည်းတတ်သလောက်မှတ်သလောက် လက်လေးနဲ့ဆွပေးပါတော့တယ်။ ခုမှသုတ်လွှတ်ထားတာဆိုတော့ ပျော့နေသေးတာပါပဲ ညစ်ချင်တာနဲ့ပဲ”ပါးစပ်နဲ့ထပ်လုပ်ရင်မြန်တယ်”လိုပြောလိုက်တော့ ယဉ်ယဉ်မာလည်း လီးကို ပြန်စုပ်ပေးပါတော့တယ်။ဒီခါတော့သူလည်း နည်းနည်းတတ်လာပြီဆိုတော့ လီးစုပ်ပေးတာပိုပြီးအရသာရှိလာပါတယ် သင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ သူ့ရဲ့တတ်လွယ်မှုကြောင့်မကြာခင်မှာပဲ မောင်မင်းကြီးသား ခေါင်းပြန်ထောင်လာပြန်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ဖွေးဖွေးလေးကို အာသီသဖြစ်နေပြီဆိုတော့ လီးပြန်တောင်လာတာနဲ့ လုပ်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတော့တယ်။”ငါ့လီးကို အပေါ်ကနေပြီး နင်စောက်ဖုတ်ထဲထည့်တော့”လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်မှာပြုခဲ့တဲ့အပြုမူပြန်တွေပြီး ယဉ်ယဉ်မာကို ရင့်ရင့်သီးသီးပဲ ပြောဆို ဆက်ဆံနေလိုက်ပါတယ်။
သူကဘာမှပြမပြောပဲ ကျွန်တော့်ပေါ်တက်ခွလိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ မာနေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော့်လီးကိုကိုင်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်အဝလေးကိုတေ့လိုက်ပါတယ်။ အသာဖိချလိုက်တော့ လက်တစ်ဆစ်လောက်ဝင်ရုံရှိသေးသူ့မျက်နှာရှုံ့မဲ့နေတာကို ဝိုးတဝါးမြင်နေရပါတယ်။” ဆက်ပြီးသွင်းလေ”လို့အမိန့်သံဆန်ဆန်ပြောလိုက်တော့သူ ထပ်ပြီးဖိချလိုက်ပြန်ပါတယ်။ လီးတစ်ဝက်ဝန်းကျင်အရောက်မှာ စောက်ဖုတ်ထဲကတားဆီးထားတဲ့အရာ ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီ။ ယဉ်ယဉ်မာ ဟာ ပါကင်လေးပဲဆိုတာ သူ့လည်းရပ်နေပါတယ် ကျွန်တော်က “အဲဒီလောက်ပဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်နေ”လို့ပြောလိုက်တော့ သူက တစ်ဝက်လောက်ပဲ ညှောင့်နေပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်လေးတွေနဲ့ လီးအဝင်အထွက်ကောင်းလာပါတယ်။အဲဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လည်း သူဖင်ကြွပြီး ပြန်အဆောင့်မှာ ကျွန်တော့်ဖင်ကို ဆတ်ကနဲမြှောက်ပြီးဆောင့်ပစ်လိုက်တာ ထုတ်ခနဲ စိတ်ထဲဖြစ်သွားပြီး သူ့နှုတ်ဖျားက “အ”ခနဲအသံထွက်လာပါတယ် ဆီးခုံချင်းက ထိကပ်သွားပြီးတော့ သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းထောင့်မှာ မျက်ရည်စလေးစီးကျလာတာကို လက်ခနဲမြင်လိုက်ရပါတယ်။”ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန်လေးဆောင့်တော့”လို့ပြောလိုက်တော့ သူက စိတ်ညှို့ခံရသူလို ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ဆောင့်နေပါတော့တယ်။အံကြတ်ထားတဲ့သူ့သွားချင်းပွတ်တိုက်သံကို အာရုံထဲကနေကြားသိလိုက်ပါတယ်။
အပျိုစင်မလေးရဲ့အဖုတ်က ကြပ်တည်းစွာနဲ့ပဲ လီးကိုဆွဲညှစ်ထားပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်နေလေရဲ့။အချက်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်ဆောင့်ပြီးတော့ သူလည်း နေသာလာပါတော့တယ် အံကြိတ်သံအစား ကာမရသခံစားနေတဲ့အသံကိုကြားလာခဲ့ရတယ်။ ပထမဆုံးသော လီးနဲ့ထိတွေမှုမှာတင် သူ့ကိုအရသာတစ်ခုပေးစွမ်းနေပါတယ် အသားဖြူတော့ အရည်ထွက်တာများပြီး လီးအဝင်အထွက် အဆင်ပြေနေတော့ မသိမသာနဲ့ပဲ သူ့ဆောင့်ချက်လေးတွေစိပ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့်အောက်ကနေဖင်မြှောက်ပေးရင်းနဲ့စောက်ဖုတ်နံရံအတွင်းသားလေးတွေနဲ့ လီးရဲ့ပွတ်တိုက်တဲ့အရသာကို သာယာနေမိခဲ့ပါတော့တယ်။မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်ခရီးဆုံးပန်းတိုင်နီးကပ်လာတာကို စိတ်ကအလိုလိုသိလာခဲ့ပါတယ်။
”ငါ…ပြီးတော့မယ် ယဉ်ယဉ်မာ သွက်သွက်လေးဆောင့်တော့”လို့ပြောလိုက်တော့ သူ့ဖင်လုံးလုံးလေးကို မြှောက်ကာ မြှောက်ကာနဲ့ အရှိန်နဲ့ပစ်ဆောင့်နေပါတော့တယ် တစ်ဖတ်ဖတ်နဲ့ ဆီးခုံချင်းရိုက်မိတိုင်း လီးထိပ်ကထောက်သွားတဲ့သားအိမ်နံရံ…အလွန်ကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ပြီးတော့ စိတ်တွေကိုလွှတ်ထားလိုက်တာ ကျွန်တော့်လီးထိပ်ကသုတ်ရည်တွေက ယဉ်ယဉ်မာရဲ့သားအိမ်ကိုပန်းပြီး လမ်းဆုံကိုရောက်သွားချိန် သူလည်းတွန့်ကနဲ့ တွန့်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီး ကျွန်တော့်ဆီးခုံပေါ် စောက်ရည်တွေအံကျလာပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးဖင်ကိုမြှောက်ပြီး လီးကိုပြွတ်ခနဲ့ထုတ်လိုက်ချိန်မှာ ပွက်ခနဲကျလာတဲ့စောက်ရည်တွေမနည်းမနောပါပဲ…….သူလည်း ကျွန်တော်အိပ်နေတဲ့ဘေးမှာ လှဲချလိုက်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို့ဖက်ထားရင်းနဲ့ သူ့နို့လေးကို လျှာလေးနဲ့ကစားနေလိုက်ပါတယ် ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဆုပ်နယ်ရင်းနဲ့ နို့လုံးကျစ်ကျစ်လေးတွေရဲ့အထိအတွေ့ကိုခံယူရင်း နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် စိုင်းပြင်းနေမိပါတယ် နှစ်ချီပြီးထားတော့ နားလန်မထူလာသေးဘူးဗျ ခုထိ။နောက်ထပ်တစ်ချီဆွဲပြီးပြန်လွှတ်မယ် စိတ်ကူးရင်းနဲ့ပဲ “ယဉ်ယဉ်မာ ငါ့လီးပြန်တောင်လာအောင့် နို့တွေနဲ့လီးကိုပွတ်ပေးစမ်း”လို့ပြောလိုက်တော့ သူက ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီခါပြန်ထဖို့အချိန်အတော်ယူရမယ်ဆိုတာသိလို့ နို့နဲ့လီးကိုပွတ်ပေးတာဇိမ်ခံရင်း ခဏမှိန်းနေလိုက်ပါတော့တယ်။
တင်းခနဲ့ လီးရဲ့အချက်ပြသံနဲ့အတူ မှေးကနဲ့အိပ်မိမလိုဖြစ်နေရာကနေ ကျွန်တော် ပြန်လည်နိုးကြားလာခဲ့တယ် ကျွန်တော်လည်း ဒီတစ်ခါတော့ အားရပါးရနောက်ဆုံးချီဆွဲလွှတ်မယ်အတွေးနဲ့ သူ့ကို ကုန်းခိုင်းပြီး သူ့ဖင်လုံးလုံးလေးကိုင်ရင်းလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရလိုက်ပါတယ် အဲဒါနဲ့ “နင်ငါ့ကို လေးဘက်ကုန်းပေး”လို့ပြောလိုက်တော့ သူက ဖင်ဘူးတောင်လေးထောင်ပြီးကုန်းပေးရှာပါတယ် ကျွန်တော်လည်း ပေါင်းကြားကပြူထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို တံတွေးနည်းနည်းဆွတ်လိုက်ရင်း လီးကိုသွင်းလိုက်ပါတယ် တစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာ သူဖင်လုံးလုံးလေးကိုင်ပြီး
ကျန်နေတဲ့အပိုင်း ပစ်ဆောင့်လိုက်တာ……အင့်ကနဲ့ရှေ့ငိုက်ကျသွားပြီးတော့ ညည်းသံသဲ့သဲ့နဲ့အတူ အပျိုမလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ တတိယနဲ့နောက်ဆုံးအချီလိုးပွဲက ကာမပန်းတိုင်တစ်ခုဆီ ခရီးစနှင်လိုက်မိပါတော့တယ်….. နေ့ဘက်ရောက်တော့ အဲဒီနေ့တစ်နေ့လုံး ယဉ်ယဉ်မာ အပြင်တောင်မထွက်ဘူး ကျွန်တော်လည်း အလတ်မအကိတ်ကြီးချောင်းရင်းနဲ့ သူ့အခြေအနေလေး ကြည့်မလို့ဟာပဲ။မထူးပါဘူးဆိုပြီး အလတ်မ ခင်ခင်မာ ကိုပဲအာရုံစိုက်ချောင်းမြောင်းနေလိုက်တာ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ အကြီးမ မတင်တင်မာ အိမ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့ အလတ်မထွက်လာတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အခန်းထဲက အရုပ်ကလေးပြန်ယူပြီးဆိုင်ဘက်ထွက်လာလိုက်ပါတယ်။
ဆိုင်ရောက်တော့ မခင်ခင်မာက လှမ်းကြည့်ပြီး “ဘာယူမှာလဲ”လို့မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကဘာဝယ်ရမလဲ စဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲ သူကဆက်ပြောပါတယ် “နင် ဈေးလာဝယ်တယ် ငါ့အစ်မ ဈေးရောင်းတယ် ပြီးတော့ ညဘက် သူပျောက်သွားတယ် မနက်ပိုင်းမှပြန်လာတယ်။ ငါသတိမထားမိခဲ့သေးဘူး မနေ့က နင်ဈေးလာဝယ်တဲ့အချိန် ငါ့ညီမလေး ဈေးရောင်းတယ် ညဘက်ရောက်တော့ အမှတ်တမဲ့ပဲ ဘာမှသတိမထားသလိုနဲ့ သူထပြီး သွားတယ်။ငါလည်းစူးစမ်းဖို့ရာအတွက် လိုက်ချောင်းတော့ နင်က ငါ့ညီမ လက်ကိုဆွဲပြီး နင်တို့အိမ်နွားစာတဲပေါ်ခေါ်သွားတယ် ပြီးတော့ အထဲရောက်တော့ နင့်အမိန့်ပေးပြောဆိုတဲ့အတိုင်း ငါ့ညီမလိုက်လုပ်နေတဲ့အထိ ငါလိုက်ကြည့်ခဲ့တယ် ညတုန်းက ဝင်ပြီးပြောချင်ပေမယ့် ငါ့ညီမအသက်အန္တရာယ်တွေဘာတွေစိုးရိမ်လို့မပြောခဲ့ဘူး”
သူက စကားတွေအများကြီးပြောလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်း အံ့ဩသွားပြီး “ဒါဆို အကုန်လုံး အစ်မ မြင်…….”စကားတောင်မဆုံးသေးဘူး သူက “ဟုတ်တယ် ငါအကုန်မြင်တယ် နင်သောင်းကျန်းလွန်းလို့အခု ငါ့ညီမ အိပ်ရာထဲကကိုမထနိုင်သေးဘူး” “ဟုတ်လား အစ်မ” “ဟုတ်တယ် အခုလည်း နင်ဈေး လာဝယ်တယ် ငါကရောင်းတယ် အဲဒီတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးခင် နင့်ကို ငါရှောင်ပြေးတော့မယ် ငါ့ညီမနဲ့အစ်မလိုတော့ ဘုမသိဘမသိ မခံနိုင်ဘူး “ပြောပြောဆိုဆိုပဲ မခင်ခင်မာ ဆိုင်ထဲက ထွက်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်း ဘာမှလုပ်ချိန်မရလိုက်ပဲ ကြောင်ပြီး ရပ်နေမိဆဲမှာပဲ အကြီးဆုံးမ မတင်တင်မာ ဆိုင်ထဲဝင်လာပါတယ်။
“ဟေ့….ကျော်စွာ ဘာယူမလဲ ယူလေ အစ်မညီမက အိမ်သာတက်ချင်လို့ဆိုပြီး အစ်မကို ဈေးရောင်းလွှတ်လိုက်တာဟေ့ အငယ်မကတော့ နေမကောင်းဘူးထင်တယ် ခွေနေတာ” “နေကြာစေ့ထုတ်လေးပဲ ယူမယ်အစ်မ အပျင်းပြေဝါးဖို့”လို့ပြောလိုက်တော့ သူက နေကြာစေ့တစ်ထုတ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ပိုက်ဆံမပေးနဲ့အတင်းလုပ်နေလို့ လက်ထဲက ပိုက်ဆံလေးအတင်း ချထားပြီး ထွက်အလား”ကျော်စွာ…”လို့ သူလှမ်းခေါ်ပါတယ် ကျွန်တော်လှည့်အကြည့်မှာတော့…. “မမနဲ့ ဘယ်တော့ တွေ့အုံးမှာလဲ “လှမ်းမေးနေတော့ ကျွန်တော်လည်း မရတော့လည်း ရတဲ့စာပေါ့အတွေးနဲ့ “ဒီည ထွက်ခဲ့”လို့ပြန်ဖြေပြီးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ် စိတ်ထဲမှတနုံ့နုံ့နဲ့ဖြစ်နေပါတယ် ကြိတ်ပြီးချချင်နေတဲ့
အကိတ်ကြီးမခင်ခင်မာကို ကြံမရဖြစ်နေတာနဲ့ ညနေဘက် အရုပ်ကလေးကို နို့ဆီထည့်ပေးပြီး ရေမိုးချိုး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထွက်လာတော့ လက်ဖက်ရည်ထုတ်လေးဆွဲလာရင်း ကွတကွတလျှောက်လာတဲ့ ယဉ်ယဉ်မာလေးကို တွေ့တော့တာပါပဲ ကျွန်တော့်လည်းမြင်ရော သူပျော်သွားပုံရတယ် ပြုံးပြပြီးတော့ “ကို”လို့ တိုးတိုးလေးခေါ်ပါတယ် ပြီးတော့ ” ကို့ကိုအရမ်းချစ်တယ်” လို့ပြောပြီး ဆက်လျှောက်သွားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိလိုက်တာ အရုပ်ကလေးရဲ့စွမ်းအားကို တစ်ခါသုံးပြီးရင် အသုံးခံရတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကို စွဲလန်းချစ်ခင်နေတော့တာပဲ ဆိုတာကို။ကျွန်တော်လည်း လက်ဖက်ရည်သောက်ပြီးတော့ ညဘက် မတင်တင်မာ ထွက်လာမလား စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။
အရုပ်ကလေးမသုံးပဲ ချိန်ထားတာဆိုတော့ သိပ်တော့စိတ်မချရဘူးလေ။ အချိန်အစောကြီးရှိသေးတယ် မတင်တင်မာထွက်လာပါတော့တယ် အိမ်မှာ မေမေတို့ကမအိပ်သေးတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတာနဲ့ “အစ်မကလည်း အစောကြီးရှိသေးတာ အိမ်မှာမေမေတိုဘမအိပ်သေးတော့ ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲ”လို့ဆီးပြောလိုက်တော့”ရတာပေါ့ “လို့သူကပြောရင်း ဈေးဆိုင်တံခါးလေးသော့ဖွင့်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုပါ ဈေးဆိုင်ထဲခေါ်သွားပါတယ်။မှော်စွမ်းအင်တွေမပါပဲတွေ့တာဆိုတော့ ဒီညတော့ သူရှက်နေသလိုပါပဲ “အစ်မအဝတ်တွေ ချွတ်ပါလား”လို့ပြောတာကို ရှက်လို့တဲ့ လုံးလုံးမချွတ်ပဲ အကျႌကို လှန်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော်လည်း စကားများများမပြောချင်တာနဲ့ ဘောလီကြီးပါ မတင်ပြီး သူ့နို့တွေကို ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ကိုင်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ နို့တွေကို ဘယ်ညာစို့ပေးရင်းနဲ့ ပုဆိုးလှန်ပြီး သူ့လက်ထဲ လီးကိုထည့်ပေးလိုက်တော့ အပျိုးကြီးမမ မရဲတရဲနဲ့ လီးကိုပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်တာ သူ့လက်ထဲမှာ လီးက တင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။နို့တွေစို့ပေးရင်း လက်ထဲကလီးရဲ့ ပူနွေးတင်းမာတဲ့အထိအတွေ့က အပျိုကြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ စိတ်တွေ ထကြွနေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်း သူ့အဖုတ်ကြီးဆီလက်လှမ်းလိုက်တော့ အမွှေးရှည်ရှည်ကြမ်းကြမ်းတွေကို အရင်ထိတွေ့မိလိုက်ပါတယ် ။စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေဆီရောက်တော့ အနည်းငယ်စိုစွတ်နေခဲ့ပါပြီ။ အချိန်သိပ်မယူချင်တာနဲ့ပဲ “လုပ်တော့မယ်နော်အစ်မ”လို့ပြောလိုက်တော့ သူက “အင်း…လုပ်တော့”လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ပေါင်ကြားထဲဒူးထောက်ထိုင်ချရင်း လီးကို စောက်ဖုတ်ဆီတေ့လိုက်ပါတယ်။ပြီတော့ တစ်ဝက်လောက်သွင်းကြည့်တော့ ကာမအရည်ကြည်တွေကြောင့် အဆင်ပြေပြေဝင်သွားတာနဲ့ အကုန်သွင်းလိုက်ပါတယ်။မတင်တင်မာက မျက်လုံးလေးမှေးစင်းပြီး လီးဝင်လာတဲ့အရသာကိုခံနေပါတယ်။ သူ့ကိုစချင်တာနဲ့ ဆုံးခါနီးထိ ထုတ်ပြီး ဖွတ်ကနဲ့ အကုန်ဆောင့်သွင်းလိုက်တာ “အင့် ခနဲ”အသံမြည်သွားခဲ့ပြီး”လန့်လိုက်တာမောင်လေးရယ် အေးဆေးလုပ်ပါ”လို့ သူပြောလာပါတယ် ကျွန်တော်လည်း အထုတ်အသွင်းခဏလုပ်ပြီး ပိန်သွယ်သွယ် သူ့ခန္တာကိုယ်ကို အသာပွေ့ပြီးတော့ နှစ်ယောက်စလုံးထိုင်ရက်အနေအထားနဲ့ သူ့ကိုအပေည်ကဆောင့်ဖို့ပြင်ပေးလိုက်တော့ သူကအလိုက်တသိပဲ ဖင်လေးကို မြှောက်ခါ မြှောက်ခါနဲ့ ဆောင့်ပါတယ်။
သူ့ဖင်သားလေးတွေ လက်နဲ့ဆုပ်နယ်ပေးရင်း နို့တွေကိုလည်း အလွတ်မပေးပဲစို့နေလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ပါလက်ပါ သူဆောင့်နေတာကြည့်ပြီး သူအရမ်း ဖီးလာနေတာသိလိုက်ပါတယ်။ “ပြွတ်…ဖလွတ်…ဖတ်…ဖတ်”ဆိုတဲ့ကာမအသံလေးတွေက သူ့အရည်တွေပိုထွက်လာလေလေ ပိုပြီးကြားလာရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း အပျိုကြီးကို ကျန်နေတဲ့ခရေပွင့်ပါကင်လေး ဖွင့်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ ဖင်တွေဆုပ်နယ်နေတဲ့လက်ကနေ စောက်ဖုတ်ကထွက်တဲ့အရည်လေးတွေယူလိုက်ရင်း စအိုဝလေးမှာ လက်လေးနဲ့ပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။
မတင်တင်မာ တွန့်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီး ဘာမှမပြောပါဘူး ကျွန်တော်လည်း အရည်လေးတွေထပ်ယူရင်း လက်လေးတစ်ဆစ် ထို့လိုက်တော့ သူအပေါ်ကဆောင့်နေတာ ရပ်သွားပြီး “ဘာလုပ်နေတာလဲ မောင်လေးရယ်”လို့ပြောတော့ “မမ ဆီကနေ ပိုကောင်းတဲ့အရသာလေး ယူချင်လို့လေ” “ဘာပြောတာလဲ အစ်မနားမလည်ဘူး” “ဟိုလေ အစ်မ ဖင်ကိုလုပ်ချင်လို့” “ဟာကွာ အဲဒါအညစ်အကြေးစွန့်တဲ့ဟာ ညစ်ပတ်တယ် မလုပ်ပါနဲ့” “တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလို့ လုပ်ကြည့်ချင်တာပါ မမရဲ့” “မင်းကလည်းကွာ စောက်ဖုတ်ကို အားရပါးရလုပ်စမ်းပါ” “မမက လိမ္မာပါတယ်ဗျာ ဖင်ဆို ကြပ်ကြပ်လေးနဲ့လုပ်လို့ပိုကောင်းမှာ” “မလုပ်နဲ့ကွာ နာလိမ့်မယ်” “မမကလည်း ချစ်ရင်ပေးလုပ်နော်” “မင်းနဲ့တော့ခက်နေပြီကွာ နာတယ်ဆို ဆက်မလုပ်ဘူးလား ပြော” “စိတ်ချ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ် နာတယ်ဆို ရပ်ပေးမယ်”
“ပြီးတာပဲ ချစ်လွန်းလို့နော် ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး အဲဒီအပေါက်လုပ်ရတယ်လို့” “ဟုတ်ပါပြီ မမရယ်”ပြောရင်းနဲ့ လီးမချွတ်ပဲထားတဲ့ သူ့ကို ပက်လက်လှန်ချလိုက်တယ် ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ထဲကလီးကိုချွတ်လိုက်တော့ စိုရွှဲနေတဲ့အရည်တွေကို ဖင်ပေါက်လေးထဲသုတ်ပြီး လက်လေးနဲ့အသွင်းအထုတ်စလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လက်လေး တံတွေးဆွတ်ပြီး ခပ်မြန်မြန်အသွင်းအထုတ်လုပ်ကြည့်တာ သူခံနိုင်လာပြီဆိုတာသိလိုက်တော့ သူ့စအိုဝလေးရော လီးကိုရော တံတွေးတွေစိုရွှဲနေအောင်ဆွတ်လိုက်ပြီး လီးထိပ် ကွမ်းသီးခေါင်းနေရာလေး အရင်ထည့်ကြည့်တော့ . “အား နာတယ်..မရလောက်ဘူး” လို့သူရုန်းတာနဲ့ ခါလေးရုန်းမရအောင်ဆွဲထားပြီး လီးကို ဆက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
“အား…ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးကွာ လည်ချောင်ထဲထိ တစ်ဆို့ကြီးဖြစ်နေသလိုပဲ ပြီးတော့ အိမ်သာတက်ချင်သလို သေးပေါက်ချင်သလိုလိုနဲ့” ကျွန်တော်လည်း ခဏရပ်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ လက်လေးနဲ့နှိုက်ပြီး ကလိပေးနေလိုက်ပါတယ် သူ့အာရုံပြောင်းထားပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းအထုတ်အသွင်းလုပ်ကြည့်ပါတယ်။စောက်ဖုတ်အနှိုက်ခံနေရတဲ့အရှိန်နဲ့ သူ တွေဝေနေတုန်းမှာပဲ လီးကို တစ်ဆုံးသွင်းပစ်လိုက်တော့”အား…နာတယ်ကွာ မရဘူး”မတင်တင်မာက အသံအုပ်အုပ်လေးနဲ့အော်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း ခါးလေးကိုင်ပြီး အသွင်းအထုတ် ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပါတယ်။သူ့မျက်နှာကရှုံ့မဲ့နေတာပါပဲ နာနေလို့။ ကြောက်အားလန်းအားနဲ့ ဖင်ကိုရှုံ့ထားတဲ့မတင်တင်မာကြောင့် လီးဟာ သားရေကွင်းနဲ့စီးထားသလို ကြပ်တပ်နေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ထဲလက်နဲ့နှိုက်လိုက် အစေ့လေးကလိလိုက်နဲ့လုပ်ပေးရင်းနဲ့ သူ့စိတ်တွေက ကာမဘက်ရောက်သွားပြီး စအုံညှစ်ထားရာကနေ ပြန်ပြန်လျှော့ပေးလာတော့ အသွင်းအထုတ်လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။စောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်ရင်းနဲ့ဖင်လုပ်ပေးနေလိုက်တာ အပျိုကြီး “တဟင်းဟင်း”နဲ့ ငှက်ဖျားတက်သလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖင်ခံရတဲ့အရသာကို သူသဘောကြသလိုရှိလာပြီး အဝင်အထွက်လည်းကောင့်လာပါတော့တယ်။လီးဝင်လာရင် စအိုကြွက်သားကိုလျှော့ပေးပြီး လီးပြန်ထွက်တော့မယ်ဆို ဆွဲပြီး ညှစ်ညှစ်ထားတာ အတော်ကိုထူးခြားတဲ့အရသာပါပဲ စောက်ဖုတ်ထက်တောင်မှ ဖင်လုပ်ရတာသဘောကျလာမိသလိုရှိလာခဲ့တယ်။
”အစ်မ ဖင်ကုန်းပေးပါလား”လို့ပြောကြည့်လိုက်တော့ သူက “အင်း…ကုန်းပေးမယ်လေ”လို့ပြောလာပါတယ် စအိုထဲကလီးကို ခဏချွတ်ပေးလိုက်တော့ သူက ဒူးတုပ်ပြီး လေးဘက်ကုန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖင်ဝက ပွစိပွစိနဲ့ လီးအရသာသဘောကျလို့ ပြန်ပြီးဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ စောက်ဖုတ်ကလည်းအရည်တွေစိုရွှဲနေခဲ့တယ် ။စောက်ဖုတ်ကအရည်တွေ လီးကိုသုတ်လိုက်ပြီး ဖင်ထဲပြန်ထည့်ပါတော့တယ်။သူလည်း နပ်သွားပြီမို့ စအိုကြွက်သားတွေလျှော့ထားပေးတော့ ဒီတစ်ခါလုပ်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ် လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကို စောက်ဖုတ်ထဲထိုးပြီး လီးကိုဖင်ထဲအသွင်းအထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ် ပါးလွှာတဲ့အရာတစ်ခုခြားထားပြီး လီးထိပ်နဲ့ လက်ချောင်းတွေပွတ်တိုက်သွားတာက လီးကိုပိုပြီးအရသာတွေ့စေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း လပ်ချောင်းနဲ့လီး စည်းဝါးကိုက်လုပ်နေလိုက်တာ အပျိုကြီးစောက်ဖုတ်ကအရည်တွေထွက်ကျလာသလို ကျွန်တော်လည်းပြီးချင်လာခဲ့တာနဲ့ အရှိန်မြှင့်ဆောင့်လိုက်ပါတယ်။
ဆယ်ချက်ကျော်လောက်ဆောင့်အပြီးမှာတော့ သူ့စအိုထဲကို သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ပါတယ် လက်ကျန်သုတ်တွေအတွက် တစ်ချက်နှစ်ချက်ထပ်ဆောင်လိုက်ပြီး သူကလည်း သုတ်ရည်တွေကို ညှစ်ယူနေခဲ့ပါတော့တယ် နေ့စဉ်ရက်ဆက် အလတ်မအကိတ်မကြီးကိုချောင်းတာ ဘယ်လိုမှမရဘူးဗျ ကျွန်တော့်မြင်တာနဲ့အိမ်ထဲဝင်ဝင်ပြီးလစ်သွားတာ သူ့မရှိတာနဲ့ မတင်တင်မာနဲ့ကြုံလိုက် ယဉ်ယဉ်မာနဲ့ကြုံလိုက်နဲ့ပဲ လွတ်တဲ့ငါးပြီးဆိုသလိုပဲ သူ့ပဲအာသီသဖြစ်နေမိပြီး အကြီးမနဲ့အငယ်မကိုတော့ အစားထိုးအနေနဲ့ပဲဆွဲစားနေခဲ့ရတယ်။ စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကြံစည်ရမလဲချောင်းနေပေမယ့် ဘာ်လိုမှအလွတ်မပေးဘူးဗျ နောက်ဆုံးတော့ မစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပက်ဖို့အကြံတစ်ခုကို ကြံစည်မိလိုက်ပါတော့တယ်။ သူ့နာမည်က “ကိုဖိုးမောင်”ကျွန်တော်နဲ့ဘေးအိမ်က လယ်သူရင်းငှါး အလုပ်ကတော့အရမ်းကြိုးစားတာပဲ အားနည်းချက်က ရုပ်ကအတော်ဆိုးပြီး ခြေထောက်တစ်ဖက်က နည်းနည်း ဆာသလိုဖြစ်နေခဲ့တာပဲ။
ကိုယ်မရမယ့်အတူတူ အလတ်မ ခင်ခင်မာကို အမြင်ကပ်တဲ့ပုဒ်မနဲ့အကြံတစ်ခုစဉ်းစားမိပြီး နေ့လည့်ခင်းထမင်းစားချိန်မှာ တစ်ဖက်ခြံက သူရင်းငှါး ကိုဖိုးမောင်ကို အသာလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ခြံစည်းရိုးဟိုဘက်ဒီဘက်ကနေ…. “ဘာလဲကွ ကျော်စွာ ဘာပြောစရာရှိလို့လဲ” “ကိုဖိုးမောင် ကို ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခု လုပ်ပေးမလို့” “ဘာလဲ ကွ မဟုတ်ကဟုတ်ကတော့ ချောက်မတွန်းနဲ့နော်” “ချောက်မတွန်းပါဘူးဗျာ အတည်ပါ ကိုဖိုးမောင် အိမ်ရှေ့ဈေးဆိုင်က ခင်ခင်မာ ကိုမချချင်ဘူးလား” “ဟ..ချချင်တာပေါ့ကွ ဒါပေမယ့်ငါ့ရုပ်ငါ့ရည်နဲ့သူကပြန်မှမကြိုက်တာ”။ “ပြန်ကြိုက်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာ ခင်ဗျားကျုပ်ခိုင်သလိုလုပ် သေချာပေါက်ကိုချရစေ့မယ်” “ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကွ” “ညနေပိုင်းအလုပ်သိမ်းပြီးရင် ခြံစည်းရိုးရကျော်ပြီး ကျုပ်အိမ်နွားစာတဲပေါ်လာခဲ့ ရှေ့ပေါက်သူမြင်တဲ့နေရာကမလာနဲ့” “အေးကွာ ချရမယ်ဆိုလာခဲ့မယ်” …………. ညနေပိုင်းရောက်တော့ အရုပ်ကလေးယူပြီး ကျွန်တော် နွားစာတဲပေါ်ကနေစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။
ကိုဖိုးမောင်ရောက်လာတော့ အရုပ်ကလေးပြပြီး ပြောရမယ့်စကားတွေသေချာရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ သူက အစကတော့ကြောက်နေသလိုပဲ နောက်တော့ ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့သူမသိအောင်သေချာလုပ်ခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တော့ အရုပ်ကလေးယူပြီး လာလမ်းခြံစည်းရိုးကနေပြန်သွားပါတော့တယ်။အဲဒီညက ကိုဖိုးမောင်နဲ့ကျွန်တော် မခင်ခင်မာကို စောင့်နေလိုက်ကြပါတယ်။သူလာတော့ ကိုဖိုးမောင့်ကို အဆင်ပြေတဲ့နေရာခေါ်သွားတော့ဆိုပြီး လွှတ်လိုက်တော့ ဆရာသမားက လက်လေးဆွဲပြီး ခြေထောက်လေးထော့နဲ့ထော့နဲ့ နဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်။မခင်ခင်မာ ကို အရုပ်ကလေးကနေပြန်လွှတ်ခိုင်းဖို့ပြောထားတာမို့ ကျွန်တော်လည်း မနက်မှအရုပ်လေးပြန်ယူမယ်ဆိုပြီး ညတော့ ယဉ်ယဉ်မာလေးနဲ့နှပ်လိုက်အုံး မယ်အတွေးနဲ့ သူတို့အိမ်ကိုအသာဝင်ခဲ့ပြီး
ယဉ်ယဉ်မာရဲ့အိပ်ခန်းဆီ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။လမ်းမှာဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အခန်းတွေ ချောင်းကြည့်ခဲ့တော့ အကြီးမ မတင်တင်မာ ဘုရားဝတ်ပြုနေတာတွေ့ခဲ့ရပြီး လူမတွေ့တဲ့နောက်တစ်ခန်းက မခင်ခင်မာ့အခန်းဖြစ်မှာပေါ့လေ။နောက်ဆုံးအခန်းကိုရောက်တော့ တံခါးမရှိပဲခန်းဆီးလေးပဲရှိတာမိုအသာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ယဉ်ယဉ်မာ တံခါးဘက်ကိုကျောပေးပြီးအိပ်နေတာတွေ့လိုက်ပါတယ် ။ကျွန်တော်လည်းခြေဖော့ဝင်ခဲ့ရင် သူ့နံဘေးအသာဝင်ပြီး ပါးစပ်ကိုအရင်ပိတ်လိုက်ပါတယ် သူလန့်သွားပြီး ဝူးဝူး အော်မယ်အလုပ် “ကိုယ်ပါ ကျော်စွာပါ”ဆိုတော့ သူငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်။
ခုချိန်လောက်ဆို ကိုဖိုးမောင်တော့ ကျွန်တော်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ အကိတ်ကြီးကိုချနေမှာပဲ ဆိုပြီး စိတ်တွေထကြွလာခဲ့ပြီး ယဉ်ယဉ်မာ့ကိုယ်လုံးလေးဖက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေအငမ်းမရစုပ်နမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပုဆိုးလှန်ပြီး သူ့ကို လီးစုပ်ပေးခိုင်တော့ သူကစုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် တင်းမာနေတဲ့ကျွန်တော့်လီးက ယဉ်ယဉ်မာ့ရဲ့ အာငွေ့လေးနဲ့အတွေ့မှာ အကြောတွေထောင်လာတဲ့အထိ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လဲ ကိုဖိုးမောင်တို့အကြောင်းတွေးမိပြီး ချချင်လာတာနဲ့ သူ့ကိုလီးစုပ်တာ ရပ်ခိုင်းပြီး သူ့ထမီကို မလှန်ပစ်လိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးပဲ သူ့ကိုစလုပ်ပါတော့တယ်။
အမွှေးပါးပါးနဲ့အဖုတ်ဖွေးဖွေးလေးမြင်တော့ အကိတ်ကြီးကိုမေ့သွားပြီး အဖုတ်လေးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်ပါလာခဲ့မိပါတော့တယ် ယဉ်ယဉ်မာရဲ့စောက်ဖုတ်လေးထဲကို စီးပိုင်စွာရောက်နေတဲ့လီးဟာ စောက်ဖုတ်နံရံကြွက်သားလေးတွေရဲ့ နူးညံ့တဲ့အရသာကိုခံရင်းနဲ့ လိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပါတော့တယ်။လီးဝင်သွားရင် လိပ်ပါသွားပြီး လီးပြန်ထွက်လာရင်တော့ အတွင်းသားလေးတွေမြင်ရသည်အထိ ပြဲအာလို့နေပါတယ်။လိုးနေရင်းနဲ့ လက်ကအငြိမ်မနေပဲ နို့တွေကိုင်ပေးနေသလို နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နမ်းပြီးပေးနေလိုက်တာ သူအရသာတွေ့နေသလိုပါပဲ။ဖင်လေးကိုမြှောက်မြှောက်ပြီးပေးနေလေရဲ့သူ့စောက်ဖုတ်လေးက ကာမအရည်ကြည်လေးတွေ အရမ်းထွက်လာတော့ လိုးလိုက်တိုင်းမှာအသံလေးတွေမြည်မြည်လာခဲ့တယ်။
“ဗွိ…..ဗွက်…….ဗွိ…..ဗွက်”အသံလေးတွေနဲ့ ဆီးခုံချင်းတဖတ်ဖတ်ရိုက်သံလေးတွေနဲ့အတူ လောကကြီးကို မေ့လျော့နေကြသည်အထိ အရသာတွေ့နေခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးနဲ့ထမ်းပြီး အားရပါးရဆောင့်ပစ်လိုက်တာ “အား…..ကောင်းတယ် ကိုရေ…မညှာနဲ့ ဆောင့်ဆောင့်” ကာမသံလေးတွေနဲ့ပြောရင်း နှစ်ယောက်စလုံးတက်ညီလက်ညီ လိုးနေကြပါတယ်။ “အဲဒါဘာလုပ်နေကြတာလဲ”ရုတ်တရက်အသံကြားလိုက်တော့ လန့်ပြီး လိုးတာကိုရပ်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မတင်တင်မာ ကို တံခါးပေါက်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ”ဟင်….မောင်လေး….မင်း…မင်းကွာ လုပ်ရက်လိုက်တာ”ပြောရင်းနဲ့သူကြောင်ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ ကျွန်တော်သတိဝင်လာပြီး “ဟာ…မမ…လာလေ”ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ယဉ်ယဉ်မာ့ဆီကလီးကိုဆွဲချွတ်ပြီး လီးတန်းလန်းနဲ့ အပျိုကြီးကိုပွေ့ဖက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနမ်း နို့တွေနယ်ပေးလိုက်ပြီး အိပ်ရာဆီဆွဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူကြောင်ပြီးပါလာတော့ ယဉ်ယဉ်မာ့ကို မျက်စိတစ်ဖတ်မှိတ်ပြလိုတာ သူလည်း ဘုမသိဘမသိနဲ့ ခေါင်းပြန် ညိတ်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း မတင်တင်မာ့ကို ယဉ်ယဉ်မာ့ဘေး အိပ်ရာပေါ်ဆွဲလှဲပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ထားပါတယ် သူစကားပြောချိန်မရအောင် ပြီးတော့ လက်ကနို့တွေနယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ လက်တစ်ဖက်က သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုပွတ်သတ်ပြီး လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ နဲ့နဲလုပ်ပေးလိုက်တာ သူစိတ်တွေပါလာတော့ပါတယ်။စောက်ဖုတ်ကအရည်တွေရွှဲလာခဲ့တာနဲ့ ယဉ်ယဉ်မာ့ကို “မမရဲ့ နို့တွေလာစို့ပေး”လို့ ပြောတော့ သူကလည်း ကျွန်တော့်ဘက်ဖင်လေးကုန်းပြီး သူ့အစ်မနို့တွေစို့ပေးနေပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်လည်း မတင်တင်မာ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုး လီးနဲ့အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲလိုက်တာ အပျိုကြီးကော့တက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ ယဉ်ယသင်မာ့ဆီက စောက်ရည်တွေစိုနေဆဲလီးကြီးနဲ့ မတင်တင်မာ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို စပြီးလိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့စိတ်ကူးရတာနဲ့ ကျွန်တော့်ဘက်ဖင်လေးကုန်းထားပြီး စောက်ဖုတ်လေးပြူထွက်နေတဲ့ ယဉ်ယဉ်မာ့ကိုလည်း လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်းလိုးပေးလိုက်ပါတယ် ညီအစ်မနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော် အောက်က မတင်တင်မာကလည်း စောက်ဖုတ်ကြီး ကော့ကော့ပေးနေသလို ယဉ်ယဉ်မာကလည်း သူ့အစ်မနို့တွေစို့ပေးရင်းနဲ့ ဖင်လေးကို နောက်ကို ပစ်ပစ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။
တတ်နိုင်သမျှ အာရုံလွှဲ သုတ်ထိန်းပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းပေးနေလိုက်တာ ယဉ်ယဉ်မာနို့စို့တာနဲ့ ကျွန်တော်လို့တဲ့ကြားမှာ တွန့်ခနဲ့ တွန့်ခနဲဖြစ်ပြီး မတင်တင်မာ အရင်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူပြီးမှန်းသိတော့ ကျွန်တော်လည်း လီးကိုနှုတ်ခဲ့ပြီး ဖင်လေးကုန်းနေတဲ့ ယဉ်ယဉ်မာ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ ထိုးထည့်လိုက်တော့ ရှေ့ကို ကော့ကနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။
သူ့ဖင်လေးကိုကိုင်ပြီး ဆောင့်နေတော့ စောက်ဖုတ်က လေအန်တဲ့အသံလေးတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆောင့်ရင်းဆောင့်ရင်းနဲ့ပဲ အချက်နှစ်ဆယ်လောက်အရောက်မှာ လီးထိပ်က ကျင်လာပြီးပြီးတော့မယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ အရှိန်မြှင့်ပြီးဆောင့်နေလိုက်တာ “ဖတ်ဖတ်ဖတ်”ဆိုတဲ့ ဖင်နဲ့ဆီးခုံရိုက်သံ “ဗလွီ…..ဗလွက်”ဆိုတဲ့ လေအန်သံတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော့်သုတ်ရည်တွေ ယဉ်ယဉ်မာ့စောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပြီးတော့ သူလည်းတွန့်ခနဲတွန့်ခနဲ ပြီးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ပြီးတာနဲ့ သုံးယောက်သားအိပ်ရာပေါ်မှာ အနားယူကြပါတယ် ခဏနေတော့ မတင်တင်မာထပြီး ထွက်သွားခဲ့ပါတယ် အချိန်အနည်းငယ်လောက်အကြာမှာ သာပြန်လာတော့ လက်ထဲမှာ ပုဂံတစ်လုံးပါလာခဲ့ပြီး.. “ရော့…ဒါလေးစားလိုက်” “ဘာတွေလဲဟင်အစ်မ” “အိမ်ကြက်ဥရယ် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးရယ် ပျားရည်ရယ် ခေါက်လာခဲ့တာ အားရှိအောင်စားလိုက်” ကျွန်တော်လည်း ယူပြီးစားလိုက်တာ အဲဒါလည်းကုန်ရော ညီလေးက အသင့်အနေအထားပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
အဲလိုနဲ့ပဲ ညီအစ်မနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော် စခန်းသွားနေလိုက်ကြတာ မနက်လေးနာရီကျော်မှ အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်။ အပြန်မှာ ဒူးတွေကို ယိုင်ချင်ချင်ဖြစ်နေခဲ့တာ သူတို့ညီအစ်မကတော့ ကာမစည်းစိမ်ယစ်မူးပြီးတော့ အိမ်ကပျောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အကိတ်မကြီးကိုတောင် သတိမထားမိကြဘူး……… “ဟဲ့ကောင်လေး ကျော်စွာ ထအုံး မနက်ကိုးနာရီထိုးနေပြီဟဲ့” “ဟာအမေကလည်းဗျာ အိပ်ရေးမဝပါဘူးဆို” “မဝရင် နောက်မှအိပ်လလောလောဆယ်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆူညံ့နေတဲ့သတင်းထူးလေး ထပြီးနားဆင်ကြည့်အုံး” “ဘာဖြစ်နေလို့လဲ အမေရ” “အိမ်ရှေ့ဆိုင်က အလတ်မ ခင်ခင်မာလေ ဘေးအိမ်က သူရင်းငှါး ဖိုးမောင်နဲ့လိုက်ပြေးသွားလို့ ဟဲ” “ဗျာ….”ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆို…ကျွန်တော့်အရုပ်ကလေး ကိုဖိုးမောင်နောက်ပါသွားပြီ…… ကိုဖိုးမောင်တို့အတွဲကတော့ ဘယ်ဆီထိခိုးပြေးကြလဲမသိဘူး။တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ ပြန်မလာကြဘူး ကျွန်တော့်မှာတော့ အပြီးဆုံးနဲ့အငယ်ဆုံးညီအစ်မနှစ်ယောက်ကြားမှာ မရိုးနိုင်တဲ့ကာမရေယဉ်ကြောမှာမျောရင်းနဲ့ ကြာလာတော့ ရည်းစားလေးအတည်တကျနဲ့ မှော်တွေမပါတဲ့ အချစ်တစ်ခုတမ်းတနေမိခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့် သူတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်လုံးက ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်နေကြတော့ ဘာမှလုပ်မရဘူးဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲဒါနဲ့ပဲ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ရွားဦးကျောင်းက ခရေပင်ရိပ် သွားလိုက်တော့ မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ကျွန်တော် အရမ်းပျော်သွားခဲ့တယ်။အရုပ်ကလေးပေးခဲ့တဲ့ ဒွန်းစဏ္ဍားကြီးကို ဇရပ်ပေါ်မှာမြင်လိုက်ရလို့လေ။
သူ့ဆီအမြန်သွားပြီး “ဦးလေး ကျွန်တော့်ကို မှတ်မိလား” “မှတ်မိတာပေါ့ကွာ ဘယ်လိုလဲ အဆင်ပြေလား အရုပ်ကလေးက” “အဲဒါပြောချင်တာပဲ ဦးလေးရေ အရုပ်ကလေးကြောင့် ကိုယ့်ကို အရမ်းစွဲလန်းသွားတဲ့သူကို ပြန်ပြီးပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဦးလေး” “ဒါကအလွယ်လေးပါကွာ…အရုပ်ကလေးနဲ့ပဲ ပြန်လုပ်ရမှာ” “ဗျာ……တစ်ခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလား” “မရှိဘူးကွ သချႋုင်းကိုသွားပြီး အဲဒီအရုပ်ကလေးကိုမြေမြှုပ် ပြီးရင် သူ့အတွက်ရည်စူး ကုသိုလ်လုပ် အဲဒါဆိုရင် သူတို့စိတ်တွေ ပြန်ပြေသွားကြပြီး မင်းကိုစွဲလန်းနေတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားလိုက်မယ်” “သွားပါပြီ ဦးလေးရာ” ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာခဲ့မိတယ်။ညအချိန်ရောက်ရင် စောင့်ကြိုနေမယ့် ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကိုမြင်ယောင်ရင်း ဒူးတွေတောင် အလိုလိုခွေချင်လာမိသလိုပဲဗျာ……ပြီးပါပြီ။
တစ္ရက္ေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္ကြပ္ပ်စ္ေပၚမွာ လွဲအိပ္ေနတုန္း”ညီေလး….လို႔ေခၚသံၾကားလိုက္ပါတယ္။မ်က္လုံးဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေဆးလိပ္တိုက္ေနက် စ႑ာလႀကီး “ဦးေလး ေရာက္လာျပန္ၿပီလား ေဆးလိပ္ ေသာက္ခ်င္လို႔လား”လို႔ကြၽန္ေတာ္ေမးေတာ့ သူက……. “ဦးေလးတို႔အဖြဲ႕က တစ္ျခားၿမိဳ႕နယ္အထိသြားၾကမွာ ငါ့ညီရွိမလားလို႔ ဒီကိုခဏဝင္ၾကည့္တာ ဦးေလးက” “ဘာကိစၥ ရွိလို႔လဲဗ်” “ဦးေလးေျပာတာကို ယုံယုံၾကည္ၾကည့္နဲ႔လုပ္ရင္ ငါ့ညီအတြက္အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မယ္” “ဘာကိုလဲ ဦးေလး ကြၽန္ေတာ္နာမလည္ဘူး” သူက သူ႔ရဲ႕လြယ္အိတ္ေထာင္အရွည္ႀကီးထဲကေနၿပီး ပစၥည္းတစ္ခုႏႈိက္ယူလိုက္ပါတယ္ ရွ႕ုံအိတ္ေလးတစ္ခုပါ ခ်ည္ထားတဲ့ႀကိဳးကိုျဖည္ၿပီးေတာ့ အိတ္ထဲက ပစၥည္းေလးကိုထုတ္လိုက္ေတာ့ နက္ေျပာင္ေနတဲ့
ကေလးေပါက္စအ႐ုပ္ကေလးတစ္႐ုပ္ သူက “ငါ့ညီဘဝမွာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ကိုစိတ္ထဲကေနတပ္မက္လာခဲ့ရင္ ဒီအ႐ုပ္ေလးကို လက္နဲ႔ကိုင္ ဖြဖြေလးပြတ္ၿပီး အဲဒီမိန္းကေလးနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုက္မိေအာင္သြား ၿပီးေတာ့ အ႐ုပ္ေလးကို ငါ့သားအဲဒါ မင္းအေမပဲ အေဖနဲ႔အေမ အတူေနဖို႔ ငါ့သားႀကိဳးစားေပးလို႔ ေျပာ…အဲဒါဆို အဲဒီမိန္းကေလးက မင္းစိတ္ထဲကူးေနတဲ့ေနရာကို ေရာက္ေအာင္လာလိမ့္မယ္” “ဗ်ာ…တကယ္ဟုတ္လို႔လားဗ်” “ငါ့ညီကို ဦးေလးေျပာခဲ့သလိုပဲ ယုံယုံၾကည္ၾကည္သုံးရင္မွန္မွန္ကန္ကန္အက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္ ဒီအလာမွာ ငါ့ညီကို ဒီကြပ္ပ်စ္မွာ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ေတြ႕ရင္ ေက်းဇူးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ ေပးမယ္ မေတြ႕ရင္မေပးဘူးဆိုၿပီး အဓိဌာန္နဲ႔လာတာပဲ ငါ့ညီကိုတန္းေတြ႕တာ ကဲပါကြာ ဦးေျပာတာမွတ္ထား ယုံၾကည့္ရင္အက်ိဳးျပဳလိမ့္မယ္”ေျပာၿပီး ကြၽန္ေတာ့္လက္ထဲအိတ္ေလးလိုက္ထည့္ေပးၿပီး သူထြက္သြားပါတယ္။
အပ်ိဳႀကီးမတင္တင္မာမ်ား တကယ္လာခဲ့ရင္ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔လုပ္ရကိုင္ရမယ့္အရာေတြကို ခ်ေနမိတယ္ စိတ္ကူးနဲ႔။ ညရွစ္နာရီေလာက္ေရာက္ေတာ့ သူတို႔ဆိုင္ေလးသိမ္းၿပီး အားလုံးအိမ္ထဲဝင္သြားၾကတယ္ ကြၽန္ေတာ္လည္း အိမ္ေရွ႕ကခုံေလးေပၚထိုင္ရင္း သူတို႔အိမ္တံခါးဘက္ေမွ်ာ္ၿပီးေစာင့္ၾကည့္ေနလိုက္ပါတယ္။ညကိုးနာရီေလာက္အေရာက္မွာ ေမေမက “မအိပ္ေသးဘူးလား”လို႔လွမ္းေမးေတာ့ “အိပ္မရေသးဘူး ေမေမ”လို႔လွမ္းေျဖလိုက္ၿပီး ဆက္ထိုင္ေနပါတယ္။တစ္႐ြာလုံးလုံးလူေျခတိတ္ၿပီး ၿငိမ္သက္သြားတဲ့ ညဆယ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာေတာ့ မတင္တင္မာတို႔ အိမ္တံခါးပြင့္လာပါေတာ့တယ္။ကြၽန္ေတာ္လည္း မေယာင္မလည္နဲ႔အိမ္ထဲကေနလမ္းေပၚထြက္ၾကည့္ေတာ့
ကြၽန္ေတာ္ရွိရာကို တန္းၿပီးလာေနတဲ့ မတင္တင္မာကိုေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ကြၽန္ေတာ့္နားအေရာက္ မ်က္လုံးေတြကေငးၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ေနတာနဲ႔ ခပ္တည္တည္ပဲ သူ႔လက္ကိုဆြဲကိုင္ေတာ့ သူဘာမွမေျပာဘူး အဲဒါနဲ႔ပဲ လက္ကိုဆြဲၿပီး ႏြားတင္းကုပ္အေပၚက ႏြားစာထားတဲ့ တဲေလးထဲ ေခၚသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ႏြားစာထားတဲ့တဲေလးက တစ္ျခမ္းမွာ ေကာက္႐ိုးေတြအျပည့္ထည့္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ျခမ္းက ပဲေပၚခ်ိန္ ပဲေမွာ္ေတြထားဖို႔ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါတယ္။ပဲေပၚခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ ပဲေမွာ္ထားတဲ့ဘက္ကို ဖ်ာေလးခင္းၿပီး ေခါင္အုံးေလးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ပ်င္းရင္းသြားေနေနၾကေနရာေလး။တဲေလးေပၚေရာက္ေတာ့ မတင္တင္မာကို ဖ်ာေလးေပၚထိုင္ခိုင္းလိုက္ပါတယ္။
အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ်လမတင္တင္မာလည္း အရွိန္ျမႇင့္ၿပီးေဆာင့္လာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေသးသြယ္တဲ့ခႏၲာယ္ကိုယ္နဲ႔ သြက္သြက္လက္လက္လႈပ္ရွားေပးေနတာ ေအာက္ကေနဇိမ္ေတြ႕ေနခဲ့ပါတယ္။မၾကာခင္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕လီးထိပ္က က်ဥ္လာၿပီးၿပီးခ်င္လာခဲ့သလိုပဲ မတင္တင္မားရဲ႕ႏႈတ္ဖ်ားက အမ်ိဳးအမည္မသိတဲ့ညည္းသံေတြနဲ႔အတူ ခပ္ျမန္ျမန္ပဲေဆာင့္ေနပါတယ္။ “အား……အား……အစ္မ ကြၽန္ေတာ္ၿပီးေတာ့မယ္” သူကဘာမွျပန္မေျပာပါဘူး ေဆာင့္စရာရွိတာဆက္ေဆာင့္ေနရင္းနဲ႔ေလးငါးဆယ္လ်က္အေရာက္မွာ အပ်ိဳႀကီးမတင္တင္မာရဲ႕ေစာက္ေခါင္းထဲ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕သုတ္ရည္ေတြပန္းထည့္လိုက္ပါတယ္ သူလည္းေဆာင့္ရင္းနဲ႔တြန႔္တြန္လာၿပီး ေလးငါးခ်က္ထပ္ေဆာင့္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ေပၚေမွာက္က်သြားပါတယ္။
လီးနဲ႔ေစာက္ဖုတ္တတ္ရက္အေနအထားမွာပဲ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ဆီးခုံက လီးေမႊးေတြၾကားမွာသူ႔ေစာက္ဖုတ္ကက်လာတဲ့အရည္ေတြက စီးကပ္ကပ္နဲ႔ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ခဏေနေတာ့ ေပ်ာ့ေနတဲ့လီးကို သူက ႂကြၿပီးႏႈတ္လိုက္တာ ဖလြတ္ ဆိုတဲ့အသံနဲ႔အတူ ေနာက္ထပ္အရည္ေတြထပ္က်လာခဲ့ပါတယ္။ၿပီးေတာ့သူလည္း ကြၽန္ေတာ့္ေဘး လွဲခ်လိုက္ပါေတာ့တယ္။အဲလိုနဲ႔ လုပ္လိုက္နားလိုက္နဲ႔ပဲ မတင္တင္မာနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ဟာ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ တစ္ေပါင္ေက်ာ္ေရာ ေလးဘက္ေထာက္ေရာ ေဘးတစ္ေစာင္းေရာ ေလးခ်ီေလာက္ဆြဲလိုက္တာ ႐ြားဦးေက်ာင္းက အုံးေမာင္းေခါက္သံၾကားေတာ့ မနက္ေလးနာရီထိုးၿပီဆိုတာသိလိုက္ၿပီး သူျပန္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲေတြးမိၿပီးထိတ္လန႔္သြားပါတယ္။
ဒီအတိုင္းသာမိုးလင္းသြားရင္အပ်ိဳႀကီးကိုယူရေတာ့မွာေလ။အ႐ုပ္ေပးခဲ့တဲ့ဦးေလးက ေခၚနည္းပဲေျပာသြားတာ ျပန္လႊတ္ဖို႔မေျပာခဲ့ဘူး။ေနာက္ဆုံးေတာ့ႀကံရာမရပဲ အ႐ုပ္ေလးပါးစပ္နားကပ္ၿပီး “သားေလး မင္းအေမကိုျပန္ခိုင္းလိုက္ေတာ့” လို႔တိုးတိုးေျပာလိုက္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္ ကံေကာင္းသြားသလို အရမ္းေပ်ာ္သြားခဲ့တယ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ မတင္တင္မာက သူ႔အဝတ္အစားေတြသူ႔ဖာသာျပန္ဝတ္ေနလို႔ပဲ။ၿပီးေတာ့ သူ႔ဖာသာပဲ တဲေပၚကေနဆင္းၿပီးျပန္သြားခဲ့တယ္ အံ့ဩစရာေကာင္းတာက သူစိမ္ခ်ည္းပဲဆို အၿမဲေဟာင္တတ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ကေခြး ေအာင္ေမာင္းက မတင္တင္မာ သူ႔နားကျဖတ္သြားတာကို ေခါင္းေလးေတာင္ေထာင္မၾကည့္ဘူးဗ်ာ…….. မနက္ပိုင္း ကြၽန္ေတာ္ ကိုးနာရီေက်ာ္မွအိပ္ရာႏိုးတယ္ဗ်။
မ်က္ႏွာသစ္ရင္းတစ္ခါတည္း ေရပါခ်ိဳးလိုက္တယ္ ၿပီးေတာ့ ေမေမ ေၾကာ္ထားတဲ့ထမင္းေၾကာ္ကိုစားၿပီး ေဈးဆိုင္ဘက္ မတင္တင္မာရဲ႕အေျခအေနၾကည့္ဖို႔ထြက္လာခဲ့တယ္။တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲ သူဆိုင္ထိုင္ေနတာနဲ႔ညားေတာ့ ခပ္တည္တည္နဲ႔အေၾကာင္းရွာၿပီး ေဘာလ္ပင္န္တစ္ေခ်ာင္းဝယ္လိုက္ပါတယ္ ပိုက္ဆံေပးေတာ့သူက “မေပးနဲ႔ရတယ္”လို႔ေျပာလာပါတယ္ ဆက္ၿပီးေတာ့ “ညကအေတာ္ဆိုးတာပဲ မင္းက”လို႔ေျပာၿပီး ငွက္ေပ်ာသီး ဖီးၾကမ္းသုံးလုံးေပးလာပါတယ္”အားရွိေအာင္စား အိပ္ေရးပ်က္အားကုန္ထားတာ”တဲ့………..ၾကည့္ရတာ ကြၽန္ေတာ့္ကို အေတာ္ေႂကြသြားသလိုပါပဲ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြကိုလည္း မသိစိတ္လို႔ကြၽန္ေတာ္ထင္ခဲ့ေပမယ့္ သူမွတ္မိေနခဲ့တယ္ ဒီညေတာ့ ႀကိတ္ခိုက္ေနတဲ့ အလတ္မ မခင္ခင္မာကိုႀကံမယ္လို႔စိတ္ကူးေနမိပါတယ္။
အာ႐ုံထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ႏို႔အုံႀကီးႀကီး ဖင္လုံးလုံးႀကီးပဲျမင္ေနမိခဲ့တာေလ ခ်ခ်င္စိတ္ကမနည္းျပင္းထန္ေနခဲ့တာ။ညေနပိုင္းေရာက္ေတာ့ အ႐ုပ္ေလးကိုကိုင္ၿပီး အဲဒီဆိုင္ဘက္ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ဆိုင္ေရွ႕ေရာက္မွၾကည့္လိုက္တာ အငယ္ဆုံးမ ယဥ္ယဥ္မာ ဆိုင္ထိုင္ေနတာဗ် စာအုပ္တစ္အုပ္ဖတ္ေနတာ ေဈးဝယ္သူေရာက္တာေတာင္မသိဘူး။အဲဒါနဲ႔ပဲ “အဟမ္း”လို႔ေခ်ာင္းဟန႔္ၿပီးအသံေပးလိုက္ေတာ့ေမာ့ေတာင္မၾကည့္ပဲ “ဘာယူမလဲ”တဲ့ေမးလာပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္လည္း စိတ္ထဲေပၚတာ ဘလိတ္ဓား တစ္ကတ္လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သူက “စာဖတ္ရတာ အာ႐ုံေနာက္လိုက္တာ တစ္ရာဖိုး ႏွစ္ရာဖိုးနဲ႔”လို႔တိုးတိုးေျပာရင္း ဘလိတ္ဓားကတ္ထယူေပးပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္က ႏွစ္ရာတန္တစ္႐ြက္ေပးေတာ့ မၾကည့္ပဲယူၿပီး ေဈးဖိုးထည့္တဲ့ေသတၱာထဲထည့္ထားလိုက္ပါတယ္ ။ေနာက္ေတာ့ စာပဲဆက္ဖတ္ေနျပန္ေတာ့တာ ကြၽန္ေတာ္လည္းအစက အလတ္မေတြ႕မွႀကံမယ္စိတ္ကူးလာခဲ့တာ မတူသလိုမတန္သလို မေျပာခ်င္သလိုလုပ္ေနတာ အျမင္ကပ္လာတာနဲ႔အ႐ုပ္ေလး ပါးစပ္နားကပ္ၿပီး”သားေလး အဲဒါမင့္အေမပဲ အေဖနဲ႔အေမအတူအိပ္ရဖို႔ လုပ္စမ္းအုံး”လို႔ေျပာၿပီး ျပန္ထြက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ညပိုင္းေရာက္ေတာ့ ထုံးစံအတိုင္းပဲေမေမတို႔အိပ္တဲ့အခ်ိန္ေစာင့္ေနခဲ့တယ္။ လူေျခတိတ္ခ်ိန္အေရာက္မွာ အိမ္ေရွ႕ကေနထြက္ေစာင့္ေနလိုက္တာ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ယဥ္ယဥ္မာ ထြက္လာတာျမင္ရတယ္ လက္ကိုဆြဲၿပီးေတာ့ အခ်စ္ဗိမၼာန္ ႏြားစာတဲေလးဆီေခၚလာခဲ့တယ္။
သူရဲ႕လုပ္ပုံေတြ အခ်ိဳးေတြ ေန႔ခင္းတုန္းကမေက်နပ္ေနတာဆိုေတာ့ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ အျမင္ကပ္ကပ္နဲ႔ “အဝတ္အစားေတြ ခြၽတ္စမ္း”လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ စကားျပန္မေျပာပဲ သူ႔အဝတ္ေတြ တစ္ခုခ်င္းစီစခြၽတ္ပါေတာ့တယ္။ေနာက္ဆုံး ဘာမွမက်န္ပဲ ဗလာျဖစ္သြားေတာ့မွၾကည့္လိုက္တာ သူ႔ႏို႔အုံေဖြးေဖြးေလးေတြမွာ ႏို႔သီးေခါင္းကေသးေသးေလးေတြဗ် ေစာက္ဖုတ္က်ျပန္ေတာ့လည္း မတင္တင္မွာလို အေမႊးေတြထူမေနပဲ အေမႊးႏုႏုေလးေတြ နည္းနည္းပဲရွိေနတာ။စိတ္ထဲ သိပ္မၾကည္တဲ့သူဆိုေတာ့ “လီးစုပ္ေပးစမ္း “လို႔ အမိန႔္ဆန္ဆန္ပဲခိုင္းလိုက္ပါတယ္။
သူကဘာမွမေျပာပဲ ထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ကပက္လက္လွန္ေပးေတာ့ လီးကို တႁပြတ္ႁပြတ္နဲ႔စုပ္ေပးရွာပါတယ္။လုပ္စမရွိတဲ့သူဆိုေတာ့ စုပ္ဆို စုပ္႐ုံပဲ ေသခ်ာမလုပ္တတ္ဘူး အဲဒါနဲ႔” ဒစ္ေလးလည္း လွ်ာနဲယက္ ေဂြးအုေတြေရာလိုၿပီး ယက္စုပ္ၿပီး ေသခ်ာလုပ္”လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့လည္း ေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္ေပးပါတယ္။ကြၽန္ေတာ့္လည္း သူ႔ႏို႔ လုံးက်စ္က်စ္ေလးကိုလွမ္းကိုင္ၿပီး ဆုပ္နယ္ေပးေနလိုက္ပါတယ္ ၿပီးေတာ့ “ေဂြးအုေတြနဲ႔လက္နဲ႔ပြတ္ၿပီး လီးကိုပါးစပ္နဲ႔စုပ္ေပး”လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သူကလုပ္ေပးပါတယ္။စိတ္ထဲမွ ခုမွ အရမ္းကို ခံလို႔ေကာင္းၿပီးဖီလ္းရွိေနပါတယ္။
သူကဘာမွျပမေျပာပဲ ကြၽန္ေတာ့္ေပၚတက္ခြလိုက္ပါတယ္ ၿပီးေတာ့ မာေနၿပီျဖစ္တဲ့ကြၽန္ေတာ့္လီးကိုကိုင္ၿပီး သူ႔ေစာက္ဖုတ္အဝေလးကိုေတ့လိုက္ပါတယ္။ အသာဖိခ်လိုက္ေတာ့ လက္တစ္ဆစ္ေလာက္ဝင္႐ုံရွိေသးသူ႔မ်က္ႏွာရႈံ႕မဲ့ေနတာကို ဝိုးတဝါးျမင္ေနရပါတယ္။” ဆက္ၿပီးသြင္းေလ”လို႔အမိန႔္သံဆန္ဆန္ေျပာလိုက္ေတာ့သူ ထပ္ၿပီးဖိခ်လိုက္ျပန္ပါတယ္။ လီးတစ္ဝက္ဝန္းက်င္အေရာက္မွာ ေစာက္ဖုတ္ထဲကတားဆီးထားတဲ့အရာ ကြၽန္ေတာ္သိလိုက္ပါၿပီ။ ယဥ္ယဥ္မာ ဟာ ပါကင္ေလးပဲဆိုတာ သူ႔လည္းရပ္ေနပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္က “အဲဒီေလာက္ပဲ အသြင္းအထုတ္လုပ္ေန”လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သူက တစ္ဝက္ေလာက္ပဲ ေညႇာင့္ေနပါတယ္။
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သူ႔ေစာက္ဖုတ္ထဲက အရည္ေလးေတြနဲ႔ လီးအဝင္အထြက္ေကာင္းလာပါတယ္။အဲဒါနဲ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္လည္း သူဖင္ႂကြၿပီး ျပန္အေဆာင့္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ဖင္ကို ဆတ္ကနဲေျမႇာက္ၿပီးေဆာင့္ပစ္လိုက္တာ ထုတ္ခနဲ စိတ္ထဲျဖစ္သြားၿပီး သူ႔ႏႈတ္ဖ်ားက “အ”ခနဲအသံထြက္လာပါတယ္ ဆီးခုံခ်င္းက ထိကပ္သြားၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕မ်က္ဝန္းေထာင့္မွာ မ်က္ရည္စေလးစီးက်လာတာကို လက္ခနဲျမင္လိုက္ရပါတယ္။”ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မွန္မွန္ေလးေဆာင့္ေတာ့”လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သူက စိတ္ညႇိဳ႕ခံရသူလို ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့အတိုင္းပဲ ေဆာင့္ေနပါေတာ့တယ္။အံၾကတ္ထားတဲ့သူ႔သြားခ်င္းပြတ္တိုက္သံကို အာ႐ုံထဲကေနၾကားသိလိုက္ပါတယ္။
”ငါ…ၿပီးေတာ့မယ္ ယဥ္ယဥ္မာ သြက္သြက္ေလးေဆာင့္ေတာ့”လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သူ႔ဖင္လုံးလုံးေလးကို ေျမႇာက္ကာ ေျမႇာက္ကာနဲ႔ အရွိန္နဲ႔ပစ္ေဆာင့္ေနပါေတာ့တယ္ တစ္ဖတ္ဖတ္နဲ႔ ဆီးခုံခ်င္း႐ိုက္မိတိုင္း လီးထိပ္ကေထာက္သြားတဲ့သားအိမ္နံရံ…အလြန္ေကာင္းတဲ့အခိုက္အတန႔္တစ္ခုကိုခံစားလိုက္ၿပီးေတာ့ စိတ္ေတြကိုလႊတ္ထားလိုက္တာ ကြၽန္ေတာ့္လီးထိပ္ကသုတ္ရည္ေတြက ယဥ္ယဥ္မာရဲ႕သားအိမ္ကိုပန္းၿပီး လမ္းဆုံကိုေရာက္သြားခ်ိန္ သူလည္းတြန႔္ကနဲ႔ တြန႔္ခနဲ႔ျဖစ္သြားၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ဆီးခုံေပၚ ေစာက္ရည္ေတြအံက်လာပါေတာ့တယ္။ေနာက္ဆုံးဖင္ကိုေျမႇာက္ၿပီး လီးကိုႁပြတ္ခနဲ႔ထုတ္လိုက္ခ်ိန္မွာ ပြက္ခနဲက်လာတဲ့ေစာက္ရည္ေတြမနည္းမေနာပါပဲ…….သူလည္း ကြၽန္ေတာ္အိပ္ေနတဲ့ေဘးမွာ လွဲခ်လိုက္ပါေတာ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ႔ကို႔ဖက္ထားရင္းနဲ႔ သူ႔ႏို႔ေလးကို လွ်ာေလးနဲ႔ကစားေနလိုက္ပါတယ္ ၿပီးေတာ့တစ္ဖက္ကိုဆုပ္နယ္ရင္းနဲ႔ ႏို႔လုံးက်စ္က်စ္ေလးေတြရဲ႕အထိအေတြ႕ကိုခံယူရင္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတြက္ စိုင္းျပင္းေနမိပါတယ္ ႏွစ္ခ်ီၿပီးထားေတာ့ နားလန္မထူလာေသးဘူးဗ် ခုထိ။ေနာက္ထပ္တစ္ခ်ီဆြဲၿပီးျပန္လႊတ္မယ္ စိတ္ကူးရင္းနဲ႔ပဲ “ယဥ္ယဥ္မာ ငါ့လီးျပန္ေတာင္လာေအာင့္ ႏို႔ေတြနဲ႔လီးကိုပြတ္ေပးစမ္း”လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သူက ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ေပးပါတယ္။ ဒီခါျပန္ထဖို႔အခ်ိန္အေတာ္ယူရမယ္ဆိုတာသိလို႔ ႏို႔နဲ႔လီးကိုပြတ္ေပးတာဇိမ္ခံရင္း ခဏမွိန္းေနလိုက္ပါေတာ့တယ္။
တင္းခနဲ႔ လီးရဲ႕အခ်က္ျပသံနဲ႔အတူ ေမွးကနဲ႔အိပ္မိမလိုျဖစ္ေနရာကေန ကြၽန္ေတာ္ ျပန္လည္ႏိုးၾကားလာခဲ့တယ္ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဒီတစ္ခါေတာ့ အားရပါးရေနာက္ဆုံးခ်ီဆြဲလႊတ္မယ္အေတြးနဲ႔ သူ႔ကို ကုန္းခိုင္းၿပီး သူ႔ဖင္လုံးလုံးေလးကိုင္ရင္းလုပ္ဖို႔စိတ္ကူးရလိုက္ပါတယ္ အဲဒါနဲ႔ “နင္ငါ့ကို ေလးဘက္ကုန္းေပး”လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သူက ဖင္ဘူးေတာင္ေလးေထာင္ၿပီးကုန္းေပးရွာပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္လည္း ေပါင္းၾကားကျပဴထြက္ေနတဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးကို တံေတြးနည္းနည္းဆြတ္လိုက္ရင္း လီးကိုသြင္းလိုက္ပါတယ္ တစ္ဝက္ေလာက္အေရာက္မွာ သူဖင္လုံးလုံးေလးကိုင္ၿပီး
က်န္ေနတဲ့အပိုင္း ပစ္ေဆာင့္လိုက္တာ……အင့္ကနဲ႔ေရွ႕ငိုက္က်သြားၿပီးေတာ့ ညည္းသံသဲ့သဲ့နဲ႔အတူ အပ်ိဳမေလးနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ တတိယနဲ႔ေနာက္ဆုံးအခ်ီလိုးပြဲက ကာမပန္းတိုင္တစ္ခုဆီ ခရီးစႏွင္လိုက္မိပါေတာ့တယ္….. ေန႔ဘက္ေရာက္ေတာ့ အဲဒီေန႔တစ္ေန႔လုံး ယဥ္ယဥ္မာ အျပင္ေတာင္မထြက္ဘူး ကြၽန္ေတာ္လည္း အလတ္မအကိတ္ႀကီးေခ်ာင္းရင္းနဲ႔ သူ႔အေျခအေနေလး ၾကည့္မလို႔ဟာပဲ။မထူးပါဘူးဆိုၿပီး အလတ္မ ခင္ခင္မာ ကိုပဲအာ႐ုံစိုက္ေခ်ာင္းေျမာင္းေနလိုက္တာ မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာ အႀကီးမ မတင္တင္မာ အိမ္ထဲဝင္သြားၿပီးေတာ့ အလတ္မထြက္လာတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္လည္း အခန္းထဲက အ႐ုပ္ကေလးျပန္ယူၿပီးဆိုင္ဘက္ထြက္လာလိုက္ပါတယ္။
ဆိုင္ေရာက္ေတာ့ မခင္ခင္မာက လွမ္းၾကည့္ၿပီး “ဘာယူမွာလဲ”လို႔ေမးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကဘာဝယ္ရမလဲ စဥ္းစားေနတုန္းမွာပဲ သူကဆက္ေျပာပါတယ္ “နင္ ေဈးလာဝယ္တယ္ ငါ့အစ္မ ေဈးေရာင္းတယ္ ၿပီးေတာ့ ညဘက္ သူေပ်ာက္သြားတယ္ မနက္ပိုင္းမွျပန္လာတယ္။ ငါသတိမထားမိခဲ့ေသးဘူး မေန႔က နင္ေဈးလာဝယ္တဲ့အခ်ိန္ ငါ့ညီမေလး ေဈးေရာင္းတယ္ ညဘက္ေရာက္ေတာ့ အမွတ္တမဲ့ပဲ ဘာမွသတိမထားသလိုနဲ႔ သူထၿပီး သြားတယ္။ငါလည္းစူးစမ္းဖို႔ရာအတြက္ လိုက္ေခ်ာင္းေတာ့ နင္က ငါ့ညီမ လက္ကိုဆြဲၿပီး နင္တို႔အိမ္ႏြားစာတဲေပၚေခၚသြားတယ္ ၿပီးေတာ့ အထဲေရာက္ေတာ့ နင့္အမိန႔္ေပးေျပာဆိုတဲ့အတိုင္း ငါ့ညီမလိုက္လုပ္ေနတဲ့အထိ ငါလိုက္ၾကည့္ခဲ့တယ္ ညတုန္းက ဝင္ၿပီးေျပာခ်င္ေပမယ့္ ငါ့ညီမအသက္အႏၲရာယ္ေတြဘာေတြစိုးရိမ္လို႔မေျပာခဲ့ဘူး”
သူက စကားေတြအမ်ားႀကီးေျပာလိုက္ပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္လည္း အံ့ဩသြားၿပီး “ဒါဆို အကုန္လုံး အစ္မ ျမင္…….”စကားေတာင္မဆုံးေသးဘူး သူက “ဟုတ္တယ္ ငါအကုန္ျမင္တယ္ နင္ေသာင္းက်န္းလြန္းလို႔အခု ငါ့ညီမ အိပ္ရာထဲကကိုမထႏိုင္ေသးဘူး” “ဟုတ္လား အစ္မ” “ဟုတ္တယ္ အခုလည္း နင္ေဈး လာဝယ္တယ္ ငါကေရာင္းတယ္ အဲဒီေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ေသးခင္ နင့္ကို ငါေရွာင္ေျပးေတာ့မယ္ ငါ့ညီမနဲ႔အစ္မလိုေတာ့ ဘုမသိဘမသိ မခံႏိုင္ဘူး “ေျပာေျပာဆိုဆိုပဲ မခင္ခင္မာ ဆိုင္ထဲက ထြက္သြားပါေတာ့တယ္။ကြၽန္ေတာ္လည္း ဘာမွလုပ္ခ်ိန္မရလိုက္ပဲ ေၾကာင္ၿပီး ရပ္ေနမိဆဲမွာပဲ အႀကီးဆုံးမ မတင္တင္မာ ဆိုင္ထဲဝင္လာပါတယ္။
“ေဟ့….ေက်ာ္စြာ ဘာယူမလဲ ယူေလ အစ္မညီမက အိမ္သာတက္ခ်င္လို႔ဆိုၿပီး အစ္မကို ေဈးေရာင္းလႊတ္လိုက္တာေဟ့ အငယ္မကေတာ့ ေနမေကာင္းဘူးထင္တယ္ ေခြေနတာ” “ေနၾကာေစ့ထုတ္ေလးပဲ ယူမယ္အစ္မ အပ်င္းေျပဝါးဖို႔”လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သူက ေနၾကာေစ့တစ္ထုတ္ျဖဳတ္ေပးလိုက္ပါတယ္ ပိုက္ဆံမေပးနဲ႔အတင္းလုပ္ေနလို႔ လက္ထဲက ပိုက္ဆံေလးအတင္း ခ်ထားၿပီး ထြက္အလား”ေက်ာ္စြာ…”လို႔ သူလွမ္းေခၚပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္လွည့္အၾကည့္မွာေတာ့…. “မမနဲ႔ ဘယ္ေတာ့ ေတြ႕အုံးမွာလဲ “လွမ္းေမးေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း မရေတာ့လည္း ရတဲ့စာေပါ့အေတြးနဲ႔ “ဒီည ထြက္ခဲ့”လို႔ျပန္ေျဖၿပီးထြက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္ စိတ္ထဲမွတႏုံ႔ႏုံ႔နဲ႔ျဖစ္ေနပါတယ္ ႀကိတ္ၿပီးခ်ခ်င္ေနတဲ့
အကိတ္ႀကီးမခင္ခင္မာကို ႀကံမရျဖစ္ေနတာနဲ႔ ညေနဘက္ အ႐ုပ္ကေလးကို ႏို႔ဆီထည့္ေပးၿပီး ေရမိုးခ်ိဳး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထြက္လာေတာ့ လက္ဖက္ရည္ထုတ္ေလးဆြဲလာရင္း ကြတကြတေလွ်ာက္လာတဲ့ ယဥ္ယဥ္မာေလးကို ေတြ႕ေတာ့တာပါပဲ ကြၽန္ေတာ့္လည္းျမင္ေရာ သူေပ်ာ္သြားပုံရတယ္ ၿပဳံးျပၿပီးေတာ့ “ကို”လို႔ တိုးတိုးေလးေခၚပါတယ္ ၿပီးေတာ့ ” ကို႔ကိုအရမ္းခ်စ္တယ္” လို႔ေျပာၿပီး ဆက္ေလွ်ာက္သြားပါေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားမိလိုက္တာ အ႐ုပ္ကေလးရဲ႕စြမ္းအားကို တစ္ခါသုံးၿပီးရင္ အသုံးခံရတဲ့သူဟာ ကိုယ့္ကို စြဲလန္းခ်စ္ခင္ေနေတာ့တာပဲ ဆိုတာကို။ကြၽန္ေတာ္လည္း လက္ဖက္ရည္ေသာက္ၿပီးေတာ့ ညဘက္ မတင္တင္မာ ထြက္လာမလား ေစာင့္ၾကည့္ေနလိုက္ပါတယ္။
အ႐ုပ္ကေလးမသုံးပဲ ခ်ိန္ထားတာဆိုေတာ့ သိပ္ေတာ့စိတ္မခ်ရဘူးေလ။ အခ်ိန္အေစာႀကီးရွိေသးတယ္ မတင္တင္မာထြက္လာပါေတာ့တယ္ အိမ္မွာ ေမေမတို႔ကမအိပ္ေသးေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္သြားတာနဲ႔ “အစ္မကလည္း အေစာႀကီးရွိေသးတာ အိမ္မွာေမေမတိုဘမအိပ္ေသးေတာ့ ဘယ္လိုေတြ႕မွာလဲ”လို႔ဆီးေျပာလိုက္ေတာ့”ရတာေပါ့ “လို႔သူကေျပာရင္း ေဈးဆိုင္တံခါးေလးေသာ့ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကိုပါ ေဈးဆိုင္ထဲေခၚသြားပါတယ္။ေမွာ္စြမ္းအင္ေတြမပါပဲေတြ႕တာဆိုေတာ့ ဒီညေတာ့ သူရွက္ေနသလိုပါပဲ “အစ္မအဝတ္ေတြ ခြၽတ္ပါလား”လို႔ေျပာတာကို ရွက္လို႔တဲ့ လုံးလုံးမခြၽတ္ပဲ အက်ႌကို လွန္ေပးထားတယ္။ကြၽန္ေတာ္လည္း စကားမ်ားမ်ားမေျပာခ်င္တာနဲ႔ ေဘာလီႀကီးပါ မတင္ၿပီး သူ႔ႏို႔ေတြကို ပယ္ပယ္ႏွယ္ႏွယ္ ကိုင္ပစ္လိုက္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ႏို႔ေတြကို ဘယ္ညာစို႔ေပးရင္းနဲ႔ ပုဆိုးလွန္ၿပီး သူ႔လက္ထဲ လီးကိုထည့္ေပးလိုက္ေတာ့ အပ်ိဳးႀကီးမမ မရဲတရဲနဲ႔ လီးကိုပြတ္သပ္ေပးေနလိုက္တာ သူ႔လက္ထဲမွာ လီးက တင္းမာလာခဲ့ပါတယ္။ႏို႔ေတြစို႔ေပးရင္း လက္ထဲကလီးရဲ႕ ပူေႏြးတင္းမာတဲ့အထိအေတြ႕က အပ်ိဳႀကီး တဟင္းဟင္းနဲ႔ စိတ္ေတြ ထႂကြေနပါေတာ့တယ္။ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ႔အဖုတ္ႀကီးဆီလက္လွမ္းလိုက္ေတာ့ အေမႊးရွည္ရွည္ၾကမ္းၾကမ္းေတြကို အရင္ထိေတြ႕မိလိုက္ပါတယ္ ။ေစာက္ဖုတ္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြဆီေရာက္ေတာ့ အနည္းငယ္စိုစြတ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ အခ်ိန္သိပ္မယူခ်င္တာနဲ႔ပဲ “လုပ္ေတာ့မယ္ေနာ္အစ္မ”လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သူက “အင္း…လုပ္ေတာ့”လို႔ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ႔ေပါင္ၾကားထဲဒူးေထာက္ထိုင္ခ်ရင္း လီးကို ေစာက္ဖုတ္ဆီေတ့လိုက္ပါတယ္။ၿပီေတာ့ တစ္ဝက္ေလာက္သြင္းၾကည့္ေတာ့ ကာမအရည္ၾကည္ေတြေၾကာင့္ အဆင္ေျပေျပဝင္သြားတာနဲ႔ အကုန္သြင္းလိုက္ပါတယ္။မတင္တင္မာက မ်က္လုံးေလးေမွးစင္းၿပီး လီးဝင္လာတဲ့အရသာကိုခံေနပါတယ္။ သူ႔ကိုစခ်င္တာနဲ႔ ဆုံးခါနီးထိ ထုတ္ၿပီး ဖြတ္ကနဲ႔ အကုန္ေဆာင့္သြင္းလိုက္တာ “အင့္ ခနဲ”အသံျမည္သြားခဲ့ၿပီး”လန႔္လိုက္တာေမာင္ေလးရယ္ ေအးေဆးလုပ္ပါ”လို႔ သူေျပာလာပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္လည္း အထုတ္အသြင္းခဏလုပ္ၿပီး ပိန္သြယ္သြယ္ သူ႔ခႏၲာကိုယ္ကို အသာေပြ႕ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလုံးထိုင္ရက္အေနအထားနဲ႔ သူ႔ကိုအေပည္ကေဆာင့္ဖို႔ျပင္ေပးလိုက္ေတာ့ သူကအလိုက္တသိပဲ ဖင္ေလးကို ေျမႇာက္ခါ ေျမႇာက္ခါနဲ႔ ေဆာင့္ပါတယ္။
သူ႔ဖင္သားေလးေတြ လက္နဲ႔ဆုပ္နယ္ေပးရင္း ႏို႔ေတြကိုလည္း အလြတ္မေပးပဲစို႔ေနလိုက္ပါတယ္။ စိတ္ပါလက္ပါ သူေဆာင့္ေနတာၾကည့္ၿပီး သူအရမ္း ဖီးလာေနတာသိလိုက္ပါတယ္။ “ႁပြတ္…ဖလြတ္…ဖတ္…ဖတ္”ဆိုတဲ့ကာမအသံေလးေတြက သူ႔အရည္ေတြပိုထြက္လာေလေလ ပိုၿပီးၾကားလာရပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္လည္း အပ်ိဳႀကီးကို က်န္ေနတဲ့ခေရပြင့္ပါကင္ေလး ဖြင့္ဖို႔စဥ္းစားလိုက္ၿပီးေတာ့ ဖင္ေတြဆုပ္နယ္ေနတဲ့လက္ကေန ေစာက္ဖုတ္ကထြက္တဲ့အရည္ေလးေတြယူလိုက္ရင္း စအိုဝေလးမွာ လက္ေလးနဲ႔ပြတ္ေပးေနလိုက္ပါတယ္။
မတင္တင္မာ တြန႔္ခနဲ႔ျဖစ္သြားၿပီး ဘာမွမေျပာပါဘူး ကြၽန္ေတာ္လည္း အရည္ေလးေတြထပ္ယူရင္း လက္ေလးတစ္ဆစ္ ထို႔လိုက္ေတာ့ သူအေပၚကေဆာင့္ေနတာ ရပ္သြားၿပီး “ဘာလုပ္ေနတာလဲ ေမာင္ေလးရယ္”လို႔ေျပာေတာ့ “မမ ဆီကေန ပိုေကာင္းတဲ့အရသာေလး ယူခ်င္လို႔ေလ” “ဘာေျပာတာလဲ အစ္မနားမလည္ဘူး” “ဟိုေလ အစ္မ ဖင္ကိုလုပ္ခ်င္လို႔” “ဟာကြာ အဲဒါအညစ္အေၾကးစြန႔္တဲ့ဟာ ညစ္ပတ္တယ္ မလုပ္ပါနဲ႔” “တစ္ခါမွမလုပ္ဘူးလို႔ လုပ္ၾကည့္ခ်င္တာပါ မမရဲ႕” “မင္းကလည္းကြာ ေစာက္ဖုတ္ကို အားရပါးရလုပ္စမ္းပါ” “မမက လိမၼာပါတယ္ဗ်ာ ဖင္ဆို ၾကပ္ၾကပ္ေလးနဲ႔လုပ္လို႔ပိုေကာင္းမွာ” “မလုပ္နဲ႔ကြာ နာလိမ့္မယ္” “မမကလည္း ခ်စ္ရင္ေပးလုပ္ေနာ္” “မင္းနဲ႔ေတာ့ခက္ေနၿပီကြာ နာတယ္ဆို ဆက္မလုပ္ဘူးလား ေျပာ” “စိတ္ခ် ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးမယ္ နာတယ္ဆို ရပ္ေပးမယ္”
“ၿပီးတာပဲ ခ်စ္လြန္းလို႔ေနာ္ ၾကားေတာင္မၾကားဖူးဘူး အဲဒီအေပါက္လုပ္ရတယ္လို႔” “ဟုတ္ပါၿပီ မမရယ္”ေျပာရင္းနဲ႔ လီးမခြၽတ္ပဲထားတဲ့ သူ႔ကို ပက္လက္လွန္ခ်လိုက္တယ္ ၿပီးေတာ့ ေစာက္ဖုတ္ထဲကလီးကိုခြၽတ္လိုက္ေတာ့ စို႐ႊဲေနတဲ့အရည္ေတြကို ဖင္ေပါက္ေလးထဲသုတ္ၿပီး လက္ေလးနဲ႔အသြင္းအထုတ္စလုပ္ေပးလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္ေလး တံေတြးဆြတ္ၿပီး ခပ္ျမန္ျမန္အသြင္းအထုတ္လုပ္ၾကည့္တာ သူခံႏိုင္လာၿပီဆိုတာသိလိုက္ေတာ့ သူ႔စအိုဝေလးေရာ လီးကိုေရာ တံေတြးေတြစို႐ႊဲေနေအာင္ဆြတ္လိုက္ၿပီး လီးထိပ္ ကြမ္းသီးေခါင္းေနရာေလး အရင္ထည့္ၾကည့္ေတာ့ . “အား နာတယ္..မရေလာက္ဘူး” လို႔သူ႐ုန္းတာနဲ႔ ခါေလး႐ုန္းမရေအာင္ဆြဲထားၿပီး လီးကို ဆက္သြင္းလိုက္ပါတယ္။
“အား…ဘယ္လိုႀကီးမွန္းမသိဘူးကြာ လည္ေခ်ာင္ထဲထိ တစ္ဆို႔ႀကီးျဖစ္ေနသလိုပဲ ၿပီးေတာ့ အိမ္သာတက္ခ်င္သလို ေသးေပါက္ခ်င္သလိုလိုနဲ႔” ကြၽန္ေတာ္လည္း ခဏရပ္ၿပီး ေစာက္ဖုတ္ထဲ လက္ေလးနဲ႔ႏႈိက္ၿပီး ကလိေပးေနလိုက္ပါတယ္ သူ႔အာ႐ုံေျပာင္းထားၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္းအထုတ္အသြင္းလုပ္ၾကည့္ပါတယ္။ေစာက္ဖုတ္အႏႈိက္ခံေနရတဲ့အရွိန္နဲ႔ သူ ေတြေဝေနတုန္းမွာပဲ လီးကို တစ္ဆုံးသြင္းပစ္လိုက္ေတာ့”အား…နာတယ္ကြာ မရဘူး”မတင္တင္မာက အသံအုပ္အုပ္ေလးနဲ႔ေအာ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္လည္း ခါးေလးကိုင္ၿပီး အသြင္းအထုတ္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလုပ္ပါတယ္။သူ႔မ်က္ႏွာကရႈံ႕မဲ့ေနတာပါပဲ နာေနလို႔။ ေၾကာက္အားလန္းအားနဲ႔ ဖင္ကိုရႈံ႕ထားတဲ့မတင္တင္မာေၾကာင့္ လီးဟာ သားေရကြင္းနဲ႔စီးထားသလို ၾကပ္တပ္ေနခဲ့ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ႔ေစာက္ဖုတ္ထဲလက္နဲ႔ႏႈိက္လိုက္ အေစ့ေလးကလိလိုက္နဲ႔လုပ္ေပးရင္းနဲ႔ သူ႔စိတ္ေတြက ကာမဘက္ေရာက္သြားၿပီး စအုံညႇစ္ထားရာကေန ျပန္ျပန္ေလွ်ာ့ေပးလာေတာ့ အသြင္းအထုတ္ေလးလုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။ေစာက္ဖုတ္ကိုႏႈိက္ရင္းနဲ႔ဖင္လုပ္ေပးေနလိုက္တာ အပ်ိဳႀကီး “တဟင္းဟင္း”နဲ႔ ငွက္ဖ်ားတက္သလိုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ဖင္ခံရတဲ့အရသာကို သူသေဘာၾကသလိုရွိလာၿပီး အဝင္အထြက္လည္းေကာင့္လာပါေတာ့တယ္။လီးဝင္လာရင္ စအိုႂကြက္သားကိုေလွ်ာ့ေပးၿပီး လီးျပန္ထြက္ေတာ့မယ္ဆို ဆြဲၿပီး ညႇစ္ညႇစ္ထားတာ အေတာ္ကိုထူးျခားတဲ့အရသာပါပဲ ေစာက္ဖုတ္ထက္ေတာင္မွ ဖင္လုပ္ရတာသေဘာက်လာမိသလိုရွိလာခဲ့တယ္။
ကိုဖိုးေမာင္ေရာက္လာေတာ့ အ႐ုပ္ကေလးျပၿပီး ေျပာရမယ့္စကားေတြေသခ်ာရွင္းျပေပးခဲ့ပါတယ္။ သူက အစကေတာ့ေၾကာက္ေနသလိုပဲ ေနာက္ေတာ့ ေဈးဝယ္ရင္းနဲ႔သူမသိေအာင္ေသခ်ာလုပ္ခဲ့ဖို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ အ႐ုပ္ကေလးယူၿပီး လာလမ္းၿခံစည္း႐ိုးကေနျပန္သြားပါေတာ့တယ္။အဲဒီညက ကိုဖိုးေမာင္နဲ႔ကြၽန္ေတာ္ မခင္ခင္မာကို ေစာင့္ေနလိုက္ၾကပါတယ္။သူလာေတာ့ ကိုဖိုးေမာင့္ကို အဆင္ေျပတဲ့ေနရာေခၚသြားေတာ့ဆိုၿပီး လႊတ္လိုက္ေတာ့ ဆရာသမားက လက္ေလးဆြဲၿပီး ေျခေထာက္ေလးေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ နဲ႔ထြက္သြားပါေတာ့တယ္။မခင္ခင္မာ ကို အ႐ုပ္ကေလးကေနျပန္လႊတ္ခိုင္းဖို႔ေျပာထားတာမို႔ ကြၽန္ေတာ္လည္း မနက္မွအ႐ုပ္ေလးျပန္ယူမယ္ဆိုၿပီး ညေတာ့ ယဥ္ယဥ္မာေလးနဲ႔ႏွပ္လိုက္အုံး မယ္အေတြးနဲ႔ သူတို႔အိမ္ကိုအသာဝင္ခဲ့ၿပီး
ယဥ္ယဥ္မာရဲ႕အိပ္ခန္းဆီ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။လမ္းမွာျဖတ္ခဲ့ရတဲ့အခန္းေတြ ေခ်ာင္းၾကည့္ခဲ့ေတာ့ အႀကီးမ မတင္တင္မာ ဘုရားဝတ္ျပဳေနတာေတြ႕ခဲ့ရၿပီး လူမေတြ႕တဲ့ေနာက္တစ္ခန္းက မခင္ခင္မာ့အခန္းျဖစ္မွာေပါ့ေလ။ေနာက္ဆုံးအခန္းကိုေရာက္ေတာ့ တံခါးမရွိပဲခန္းဆီးေလးပဲရွိတာမိုအသာလွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ယဥ္ယဥ္မာ တံခါးဘက္ကိုေက်ာေပးၿပီးအိပ္ေနတာေတြ႕လိုက္ပါတယ္ ။ကြၽန္ေတာ္လည္းေျခေဖာ့ဝင္ခဲ့ရင္ သူ႔နံေဘးအသာဝင္ၿပီး ပါးစပ္ကိုအရင္ပိတ္လိုက္ပါတယ္ သူလန႔္သြားၿပီး ဝူးဝူး ေအာ္မယ္အလုပ္ “ကိုယ္ပါ ေက်ာ္စြာပါ”ဆိုေတာ့ သူၿငိမ္က်သြားပါေတာ့တယ္။
ခုခ်ိန္ေလာက္ဆို ကိုဖိုးေမာင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လႊတ္ခဲ့ရတဲ့ အကိတ္ႀကီးကိုခ်ေနမွာပဲ ဆိုၿပီး စိတ္ေတြထႂကြလာခဲ့ၿပီး ယဥ္ယဥ္မာ့ကိုယ္လုံးေလးဖက္ၿပီး သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေတြအငမ္းမရစုပ္နမ္းပစ္လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပုဆိုးလွန္ၿပီး သူ႔ကို လီးစုပ္ေပးခိုင္ေတာ့ သူကစုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္ တင္းမာေနတဲ့ကြၽန္ေတာ့္လီးက ယဥ္ယဥ္မာ့ရဲ႕ အာေငြ႕ေလးနဲ႔အေတြ႕မွာ အေၾကာေတြေထာင္လာတဲ့အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္လဲ ကိုဖိုးေမာင္တို႔အေၾကာင္းေတြးမိၿပီး ခ်ခ်င္လာတာနဲ႔ သူ႔ကိုလီးစုပ္တာ ရပ္ခိုင္းၿပီး သူ႔ထမီကို မလွန္ပစ္လိုက္ပါတယ္ ၿပီးေတာ့ ေလွႀကီးထိုး႐ိုး႐ိုးပဲ သူ႔ကိုစလုပ္ပါေတာ့တယ္။
အေမႊးပါးပါးနဲ႔အဖုတ္ေဖြးေဖြးေလးျမင္ေတာ့ အကိတ္ႀကီးကိုေမ့သြားၿပီး အဖုတ္ေလးရဲ႕ဆြဲေဆာင္မႈေနာက္ကို လိုက္ပါလာခဲ့မိပါေတာ့တယ္ ယဥ္ယဥ္မာရဲ႕ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲကို စီးပိုင္စြာေရာက္ေနတဲ့လီးဟာ ေစာက္ဖုတ္နံရံႂကြက္သားေလးေတြရဲ႕ ႏူးညံ့တဲ့အရသာကိုခံရင္းနဲ႔ လိုးျခင္းလုပ္ငန္းကိုစတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါေတာ့တယ္။လီးဝင္သြားရင္ လိပ္ပါသြားၿပီး လီးျပန္ထြက္လာရင္ေတာ့ အတြင္းသားေလးေတြျမင္ရသည္အထိ ၿပဲအာလို႔ေနပါတယ္။လိုးေနရင္းနဲ႔ လက္ကအၿငိမ္မေနပဲ ႏို႔ေတြကိုင္ေပးေနသလို ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းစုပ္နမ္းၿပီးေပးေနလိုက္တာ သူအရသာေတြ႕ေနသလိုပါပဲ။ဖင္ေလးကိုေျမႇာက္ေျမႇာက္ၿပီးေပးေနေလရဲ႕သူ႔ေစာက္ဖုတ္ေလးက ကာမအရည္ၾကည္ေလးေတြ အရမ္းထြက္လာေတာ့ လိုးလိုက္တိုင္းမွာအသံေလးေတြျမည္ျမည္လာခဲ့တယ္။
“ဗြိ…..ဗြက္…….ဗြိ…..ဗြက္”အသံေလးေတြနဲ႔ ဆီးခုံခ်င္းတဖတ္ဖတ္႐ိုက္သံေလးေတြနဲ႔အတူ ေလာကႀကီးကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္အထိ အရသာေတြ႕ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ သူ႔ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပုခုံးနဲ႔ထမ္းၿပီး အားရပါးရေဆာင့္ပစ္လိုက္တာ “အား…..ေကာင္းတယ္ ကိုေရ…မညႇာနဲ႔ ေဆာင့္ေဆာင့္” ကာမသံေလးေတြနဲ႔ေျပာရင္း ႏွစ္ေယာက္စလုံးတက္ညီလက္ညီ လိုးေနၾကပါတယ္။ “အဲဒါဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ”႐ုတ္တရက္အသံၾကားလိုက္ေတာ့ လန႔္ၿပီး လိုးတာကိုရပ္ၿပီးလွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ မတင္တင္မာ ကို တံခါးေပါက္မွာေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ”ဟင္….ေမာင္ေလး….မင္း…မင္းကြာ လုပ္ရက္လိုက္တာ”ေျပာရင္းနဲ႔သူေၾကာင္ၾကည့္ေနတုန္းမွာပဲ ကြၽန္ေတာ္သတိဝင္လာၿပီး “ဟာ…မမ…လာေလ”ဆိုၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ ယဥ္ယဥ္မာ့ဆီကလီးကိုဆြဲခြၽတ္ၿပီး လီးတန္းလန္းနဲ႔ အပ်ိဳႀကီးကိုေပြ႕ဖက္ၿပီး သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေတြနမ္း ႏို႔ေတြနယ္ေပးလိုက္ၿပီး အိပ္ရာဆီဆြဲေခၚလာခဲ့ပါတယ္။
သူေၾကာင္ၿပီးပါလာေတာ့ ယဥ္ယဥ္မာ့ကို မ်က္စိတစ္ဖတ္မွိတ္ျပလိုတာ သူလည္း ဘုမသိဘမသိနဲ႔ ေခါင္းျပန္ ညိတ္ျပပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္လည္း မတင္တင္မာ့ကို ယဥ္ယဥ္မာ့ေဘး အိပ္ရာေပၚဆြဲလွဲၿပီး ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းစုပ္ထားပါတယ္ သူစကားေျပာခ်ိန္မရေအာင္ ၿပီးေတာ့ လက္ကႏို႔ေတြနယ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ေနာက္ေတာ့ လက္တစ္ဖက္က သူ႔ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကိုပြတ္သတ္ၿပီး လက္ေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႔ နဲ႔နဲလုပ္ေပးလိုက္တာ သူစိတ္ေတြပါလာေတာ့ပါတယ္။ေစာက္ဖုတ္ကအရည္ေတြ႐ႊဲလာခဲ့တာနဲ႔ ယဥ္ယဥ္မာ့ကို “မမရဲ႕ ႏို႔ေတြလာစို႔ေပး”လို႔ ေျပာေတာ့ သူကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ဖင္ေလးကုန္းၿပီး သူ႔အစ္မႏို႔ေတြစို႔ေပးေနပါေတာ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္လည္း မတင္တင္မာ့ရဲ႕ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကိုး လီးနဲ႔အထက္ေအာက္ပြတ္ဆြဲလိုက္တာ အပ်ိဳႀကီးေကာ့တက္လာခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ေတာ့ ယဥ္ယသင္မာ့ဆီက ေစာက္ရည္ေတြစိုေနဆဲလီးႀကီးနဲ႔ မတင္တင္မာ့ရဲ႕ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကို စၿပီးလိုးလိုက္ပါတယ္။ေနာက္ေတာ့စိတ္ကူးရတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ဖင္ေလးကုန္းထားၿပီး ေစာက္ဖုတ္ေလးျပဴထြက္ေနတဲ့ ယဥ္ယဥ္မာ့ကိုလည္း လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းလိုးေပးလိုက္ပါတယ္ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္နဲ႔ကြၽန္ေတာ္ ေအာက္က မတင္တင္မာကလည္း ေစာက္ဖုတ္ႀကီး ေကာ့ေကာ့ေပးေနသလို ယဥ္ယဥ္မာကလည္း သူ႔အစ္မႏို႔ေတြစို႔ေပးရင္းနဲ႔ ဖင္ေလးကို ေနာက္ကို ပစ္ပစ္ေပးေနခဲ့ပါတယ္။
တတ္ႏိုင္သမွ် အာ႐ုံလႊဲ သုတ္ထိန္းၿပီး ေစာက္ဖုတ္ႀကီးနဲ႔ေစာက္ဖုတ္ေလးကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးထိန္းသိမ္းေပးေနလိုက္တာ ယဥ္ယဥ္မာႏို႔စို႔တာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္လို႔တဲ့ၾကားမွာ တြန႔္ခနဲ႔ တြန႔္ခနဲျဖစ္ၿပီး မတင္တင္မာ အရင္ၿပီးသြားခဲ့ပါတယ္။ သူၿပီးမွန္းသိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း လီးကိုႏႈတ္ခဲ့ၿပီး ဖင္ေလးကုန္းေနတဲ့ ယဥ္ယဥ္မာ့ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲ ထိုးထည့္လိုက္ေတာ့ ေရွ႕ကို ေကာ့ကနဲ႔ျဖစ္သြားပါတယ္။
သူ႔ဖင္ေလးကိုကိုင္ၿပီး ေဆာင့္ေနေတာ့ ေစာက္ဖုတ္က ေလအန္တဲ့အသံေလးေတြထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ေဆာင့္ရင္းေဆာင့္ရင္းနဲ႔ပဲ အခ်က္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္အေရာက္မွာ လီးထိပ္က က်င္လာၿပီးၿပီးေတာ့မယ္ဆိုတာသိတာနဲ႔ အရွိန္ျမႇင့္ၿပီးေဆာင့္ေနလိုက္တာ “ဖတ္ဖတ္ဖတ္”ဆိုတဲ့ ဖင္နဲ႔ဆီးခုံ႐ိုက္သံ “ဗလြီ…..ဗလြက္”ဆိုတဲ့ ေလအန္သံေတြနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ့္သုတ္ရည္ေတြ ယဥ္ယဥ္မာ့ေစာက္ဖုတ္ထဲ ပန္းထည့္လိုက္ၿပီးေတာ့ သူလည္းတြန႔္ခနဲတြန႔္ခနဲ ၿပီးသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ၿပီးတာနဲ႔ သုံးေယာက္သားအိပ္ရာေပၚမွာ အနားယူၾကပါတယ္ ခဏေနေတာ့ မတင္တင္မာထၿပီး ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေလာက္အၾကာမွာ သာျပန္လာေတာ့ လက္ထဲမွာ ပုဂံတစ္လုံးပါလာခဲ့ၿပီး.. “ေရာ့…ဒါေလးစားလိုက္” “ဘာေတြလဲဟင္အစ္မ” “အိမ္ၾကက္ဥရယ္ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးရယ္ ပ်ားရည္ရယ္ ေခါက္လာခဲ့တာ အားရွိေအာင္စားလိုက္” ကြၽန္ေတာ္လည္း ယူၿပီးစားလိုက္တာ အဲဒါလည္းကုန္ေရာ ညီေလးက အသင့္အေနအထားျပန္ျဖစ္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။
အဲလိုနဲ႔ပဲ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္နဲ႔ကြၽန္ေတာ္ စခန္းသြားေနလိုက္ၾကတာ မနက္ေလးနာရီေက်ာ္မွ အိမ္ကိုျပန္လာခဲ့ရတယ္။ အျပန္မွာ ဒူးေတြကို ယိုင္ခ်င္ခ်င္ျဖစ္ေနခဲ့တာ သူတို႔ညီအစ္မကေတာ့ ကာမစည္းစိမ္ယစ္မူးၿပီးေတာ့ အိမ္ကေပ်ာက္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အကိတ္မႀကီးကိုေတာင္ သတိမထားမိၾကဘူး……… “ဟဲ့ေကာင္ေလး ေက်ာ္စြာ ထအုံး မနက္ကိုးနာရီထိုးေနၿပီဟဲ့” “ဟာအေမကလည္းဗ်ာ အိပ္ေရးမဝပါဘူးဆို” “မဝရင္ ေနာက္မွအိပ္လေလာေလာဆယ္ေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဆူညံ့ေနတဲ့သတင္းထူးေလး ထၿပီးနားဆင္ၾကည့္အုံး” “ဘာျဖစ္ေနလို႔လဲ အေမရ” “အိမ္ေရွ႕ဆိုင္က အလတ္မ ခင္ခင္မာေလ ေဘးအိမ္က သူရင္းငွါး ဖိုးေမာင္နဲ႔လိုက္ေျပးသြားလို႔ ဟဲ” “ဗ်ာ….”ကြၽန္ေတာ့္မ်က္လုံးေတြ ျပဴးက်ယ္သြားခဲ့ပါတယ္။
ဒါဆို…ကြၽန္ေတာ့္အ႐ုပ္ကေလး ကိုဖိုးေမာင္ေနာက္ပါသြားၿပီ…… ကိုဖိုးေမာင္တို႔အတြဲကေတာ့ ဘယ္ဆီထိခိုးေျပးၾကလဲမသိဘူး။တစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ ျပန္မလာၾကဘူး ကြၽန္ေတာ့္မွာေတာ့ အၿပီးဆုံးနဲ႔အငယ္ဆုံးညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ မ႐ိုးႏိုင္တဲ့ကာမေရယဥ္ေၾကာမွာေမ်ာရင္းနဲ႔ ၾကာလာေတာ့ ရည္းစားေလးအတည္တက်နဲ႔ ေမွာ္ေတြမပါတဲ့ အခ်စ္တစ္ခုတမ္းတေနမိခဲ့တယ္။ဒါေပမယ့္ သူတို႔ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္လုံးက ကြၽန္ေတာ့္ကို အရမ္းခ်စ္ေနၾကေတာ့ ဘာမွလုပ္မရဘူးျဖစ္ေနခဲ့တယ္။အဲဒါနဲ႔ပဲ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ႐ြားဦးေက်ာင္းက ခေရပင္ရိပ္ သြားလိုက္ေတာ့ ျမင္လိုက္ရတဲ့ျမင္ကြင္းက ကြၽန္ေတာ္ အရမ္းေပ်ာ္သြားခဲ့တယ္။အ႐ုပ္ကေလးေပးခဲ့တဲ့ ဒြန္းစ႑ားႀကီးကို ဇရပ္ေပၚမွာျမင္လိုက္ရလို႔ေလ။
သူ႔ဆီအျမန္သြားၿပီး “ဦးေလး ကြၽန္ေတာ့္ကို မွတ္မိလား” “မွတ္မိတာေပါ့ကြာ ဘယ္လိုလဲ အဆင္ေျပလား အ႐ုပ္ကေလးက” “အဲဒါေျပာခ်င္တာပဲ ဦးေလးေရ အ႐ုပ္ကေလးေၾကာင့္ ကိုယ့္ကို အရမ္းစြဲလန္းသြားတဲ့သူကို ျပန္ၿပီးေျပေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဦးေလး” “ဒါကအလြယ္ေလးပါကြာ…အ႐ုပ္ကေလးနဲ႔ပဲ ျပန္လုပ္ရမွာ” “ဗ်ာ……တစ္ျခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့ဘူးလား” “မရွိဘူးကြ သခ်ႋဳင္းကိုသြားၿပီး အဲဒီအ႐ုပ္ကေလးကိုေျမျမႇဳပ္ ၿပီးရင္ သူ႔အတြက္ရည္စူး ကုသိုလ္လုပ္ အဲဒါဆိုရင္ သူတို႔စိတ္ေတြ ျပန္ေျပသြားၾကၿပီး မင္းကိုစြဲလန္းေနတဲ့စိတ္ေတြေပ်ာက္သြားလိုက္မယ္” “သြားပါၿပီ ဦးေလးရာ” ေခါင္းငိုက္စိုက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္အိမ္ျပန္လာခဲ့မိတယ္။ညအခ်ိန္ေရာက္ရင္ ေစာင့္ႀကိဳေနမယ့္ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ကိုျမင္ေယာင္ရင္း ဒူးေတြေတာင္ အလိုလိုေခြခ်င္လာမိသလိုပဲဗ်ာ……ၿပီးပါၿပီ။
Categorized as အင်းဆက် Tagged မှော်ဆန်တဲ့အချစ်